Myanmar Express: ဆင်ခြင်စရာ
Last 30 Day Pageviews
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စိတ်ပျက်နေသူ များပြား
ခဏလောက် ထ ကြည့်ပါအုံး အမျိုးသားဖခင်ကြီးရယ်....
အသုံးမကျ (၁) နှစ်
Happy BD Daw Aung San Suu Kyi
ဒုတိယ ပင်လုံနှင့် ရှေ့တိုးမရ နောက်ဆုတ်မရ အရှက်လှလှနဲ့ ဒေါ်စု
အသုံးမကျ (၂) နှစ်
ပြည်သူကိုယုံသည် သို့သော် ဒေါ်စုကိုမယုံ
မောင်နှမချင်း ရင်ကြားမစေ့နိုင်သေးသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဘာလဲ့ဟဲ့ ကျော်သူနဲ့ ရွှေဇီးကွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မေးခွန်း (၅၅) ခု
Showing posts with label ဆင်ခြင်စရာ. Show all posts
ဒါဖတ်ပြီးမှ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ် ထိုး/မထိုး ဆုံးဖြတ်ပါ
၄၃၆ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
၄၃၆ ဆိုသည်မှာ ယနေ့အစိုးရသစ် နှင့် လွှတ်တော်များ ပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်ခဲ့ပေးသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁၂) တွင် ပြဌာန်းထားသည့် ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၅၉(စ) အပါအဝင် နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးသော ပုဒ်မများကို ပြင်ဆင်လိုပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ ၇၅% ကျော်မှ သဘောတူရမည် ဖြစ်ပြီး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒ ခံယူရမည်ဟု ပုဒ်မ ၄၃၆ တွင် ပြဌာန်းထားသည်။ အရှင်းဆုံးနားလည်အောင် ပြောရလျှင် ပုဒ်မ ၄၃၆ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ဥပဒေပုဒ်မများကို နိုင်ငံသား အားလုံး၏ ဆန္ဒမကောက်ယူပဲ လွယ်လွယ်နှင့် မပြင်နိုင်ရန် ကာကွယ်ထားသော ဥပဒေဖြစ်သည်။၄၃၆ ကို ဒေါ်စု ဘာကြောင့်ပြင်ချင်ရတာလဲ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ဆင်ရန် ဟောပြောပွဲများကို ပထမဆုံး လုပ်ခဲ့သူများမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD မဟုတ်ပါ။ ၄၃၆ ပြင်ဖို့ ပထမဆုံး ဟောပြောပွဲလုပ်ခဲ့သူမှာ ဦးနေမျိုးဇင်နှင့် ဦးဝင်းချိုတို့ ဖြစ်ပြီး အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လွှတ်တော်သို့ ပထမဆုံး အဆိုတင်သွင်းသူမှာ သူရဦးအောင်ကိုဖြစ်သည်။ NLD မှ ပြင်ဆင်ရန် ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ပုဒ်မ မှာ ၅၉(စ) ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတဖြစ်လာပါက ၎င်းတို့အခွင့်အရေး ပိုရရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ပါတီဥက္ကဌ၏ လမ်းညွန်မှုကြောင့် လည်းကောင်း NLD ပါတီဝင်များက ၅၉(စ) ပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မှာလည်း သမ္မတလုပ်ချင်စိတ် တစ်ခုကြောင့် နိုင်ငံအတွက် အရေးပါသည့် ၅၉(စ) ကို မရမက ပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ သို့သော် ၅၉(စ) ကို ပြင်ဆင်ရန် အဓိက အတား အဆီးမှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခွင့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ကာ NLD မှ လက်မှတ် ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်သည်။ အရှင်းဆုံးနားလည်အောင် ပြောရလျှင် ၄၃၆ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြင်လိုသည်မှာ နိုင်ငံ့စီးပွားရေး အတွက် မဟုတ်၊ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ အတွက် မဟုတ်၊ လူထုအတွက် မဟုတ်ပဲ ၎င်း သမ္မတ လုပ်နိုင်ရေး အတွက်သာဖြစ်သည်။၅၉(စ) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း ၅၉(စ) ဆိုသည်မှာ အခြေခံဥပဒေ အခန်း (၃) တွင်ပြဌာန်းထားသော နိုင်ငံတော် သမ္မတ နှင့် ဒုသမ္မတတို့၏ အရည်အချင်း များဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတလုပ်မည်သူကို အချက် (၇) ချက်ဖြင့် ကန့်သက်ထားပြီး ထိုအထဲတွင် နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထက်ထားသူ၊ နိုင်ငံခြားသား သားသမီးများနှင့် ဆွေမျိုးများရှိသူတို့ မဖြစ်ရ ဟူ၍ပါရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့် အမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကမှ မိမိတို့၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နို်င်ငံကို တိုင်းတပါး က နေ သွယ်ဝိုက်သော နည်းလမ်းနဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု မခံရစေရန် ကာကွယ်ထားသော ဥပဒေ ပုဒ်မဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်၊ ဥရောပ နှင့် အနောက်နိုင်ငံ များသာမက အရှေ့အာရှ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ပုဒ်မများကို ပြဌာန်းထားသည်။ အချို့ နိုင်ငံများသည့် မြန်မာနိုင်ငံထက်ပင် ကန့်သက်ချက်များစွာ ထည့်သွင်းထားသည်။ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင် ဓလေ့ထုံးစံရှိပြီး ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းကား၍ အစဉ် အလာကြီးမားသော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ကို အုပ်ချုပ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့် အခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် ၇ ချက်လောက်ကိုတော့ ကိုက်ညီသင့်သည်။၄၃၆ ကို ဘာကြောင့် မပြင်သင့်တာလဲ
၄၃၆ ပြင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါက နိုင်ငံအတွက် အရေးပါသော အချက်များကို လွှတ်တော်အမတ်များက ပြည်သူ့ဆန္ဒမကောက်ယူတော့ပဲ ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရေးဆွဲပြဌာန်း ကြတော့မည်။ နိုင်ငံအတွက် မည်မျှ အရေးပါသည့် ဥပဒေဖြစ်စေ လွှတ်တော်အမတ် အနည်းစုဆန္ဒရှိလျှင် ပြင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ အရင်ဆုံး ပြင်မည့် ပုဒ်မ မှာ ၅၉(စ) ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်သွားမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတဖြစ်သွားပါက မြန်မာအိမ်ဖြူတော်တွင် နိုင်ငံခြားသား မိသားစု ချက်ခြင်း ရောက်လာတော့မည်။ နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားများတွင် မြန်မာ စကားမတတ်သော ဒေါ်စု သားများ တောင်ရှည်ပုဆိုး မဝတ်တက်ဝတ်တက်ဖြင့် အခမ်းအနား တက်တော့မည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများဆုံး ပါဝင်သည့် NLD ပါတီမှ သမ္မတဖြစ်လာခြင်းကြောင့် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်အရ နိုင်ငံအနှံ့ ဗလီများ မှိုလိုပေါက်လာတော့မည်။ OIC ရုံးဖွင့်ခွင့်ရသွားမည်။ ဘင်္ဂါလီများ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်သွားကာ ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲတော့မည်။ လူ့အခွင့်အရေး အရ မယား ယူနိုင်သလောက် ယူကြတော့မည်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးအရ ကလေး မွေးနိုင်သလောက်
မွေးကြတော့မယ်။ မြို့တိုင်း၏ အလယ်တွင် ဗလီ များ နေရာယူလာကာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ မြို့ပြင် ရောက်သွားကြမည်။ (အခုတောင် မြို့အချို့မှာ ဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်)။ မြို့လည်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပဌာန်းသံမကြားရတော့ ကြေးစည်သံမကြားရတော့။ ကုလားအော်သံတွေသာ ကြားရတော့မည်။ NLD မထောက်ခံသည့် အမျိုးစောင့်ဥပဒေမှာလည်း အလိုလို ပျက်ပြယ်သွားပြီး အမျိုး၊ ဘသာာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး ဆရာတော်များ ဖိနှိပ်ခံရကာ ဘာသာ၊ သာသနာ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်သွားမည်။ Time မဂ္ဂဇင်းသာမက ပြည်တွင်းမှာ အသစ်ထွက်ပေါ်လာမည့် ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံး တိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးများကို အကြမ်းဖက်သမား ဟု နေ့တိုင်း ဖော်ပြခံရတော့မယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ဖျက်ဆီးခံရမည်။ ဘုန်းကြီးများ သတ်ခံရမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကျေးရွာများ မီးရှို့ခံရသည်။ မွတ်ဆလင်တို့ အနိုင်ကျင့်တာမခံနိုင်လို့ သွားတိုင်ပါက တရားသူကြီးချုပ် ဦးကိုနီ နှင့်တွေ့လိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးတွေ တိုးတက်သွားပြီး အမျိုးသားရေးနဲ့ သာသနာရေးတွေ ထိုးကျသွားမည်။ သမ္မတကို စံယူ၍ မြန်မာအမျိုးသမီးများ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် လက်ထက်ခြင်းက အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ အကြိုက်ဖြစ်လာမည်။
ရုပ်ဝတ္ထုတွေ များစွာ အဆင့်မြင့်သွားလိမ့်မည်။ စိတ်ဓာတ်တွေ ကတော့ အောက်ကျ သွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးများ စိန်တွေ၊ ရွှေတွေ ဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး အလှဆင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘာသာခြား မယားဖြစ်နေမည်။ ငွေကြေးတွေ ချမ်းသာသွားကြမည်။ စာရိတ္တတွေ ဆင်းရဲသွားကြမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတသမ်းတမ်း ၅ နှစ်အတွင်း လွှတ်တော်ထဲက အင်အားအများဆုံး NLD ပါတီဝင်များ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်အပြီး ၂၀၂၀
တွင် သမ္မတအရည်အချင်း ကန့်သက်ချက်မှာ မရှိသလောက် ဖြစ်သွားတာကြောင့် တရုတ်၊ ကုလား၊ မည်သူမဆို မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတလုပ်ခွင့် ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ လွှတ်လပ်ရေးရပြီး ၆၇ နှစ်အကြာ တိုင်းတပါး၏ အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တာ ပြန်လည် ခံရတော့မည်။
အရှင်းဆုံး နားလည်အောင် ပြောရလျှင် သင်တို့ ရေးထိုးမည့် လက်မှတ်တစ်ခုသည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံအား နောင် အနှစ် ၂၀ အတွင်း ဘာသာ၊ သာသနာ ကွယ်ပျောက် ကာ တိုင်းတပါး ကျွန်ဘဝ အလိုလိုပြန်ရောက်သွားစေမည့် စီမံကိန်း အတွက် အထောက်အပံ့တစ်ခု ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ . www.MyanmarExpress.net
ရန်ကုန်လို တခြားမြို့တွေလည်း ရေကြီးကြအုံးမယ်
From : .. https://www.facebook.com/mmparliament
ရန်ကုန်လို တခြားမြို့တွေလည်း ရေကြီးကြအုံးမယ်--------------------------------------------------------------ရန်ကုန်ရေကြီးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေတွေ့တော့ မနှစ်က လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ မျက်နှာပွင့်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို သွားပြီး သတိရမိတယ်။ အဲဒီနေ့က မလိုအပ်တဲ့ နေရာက အသုံးစရိတ်တွေကို ရပ်တန့်ထားပြီး ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ကို တိုးသုံးဖို့ ဆိုတဲ့ အဆိုပါ။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ အဆုံးအဖြတ်မှာတော့ ကန့်ကွက်သူမရှိ ထောက်ခံမှုနဲ့ နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရုံးများနဲ့ သံတမံရပ်ကွက် တွေမှာ ရေဝင်ရေထွက် စနစ်၊ မိလ္လာစနစ်နဲ့ လျှပ်စစ်မီးစနစ်တွေ ကြိုတင်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။လူမရောက်သေးပေမယ့် အကွက်ချထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ရေဝင်ရေထွက်စနစ်၊ မိလ္လာစနစ်၊ လျှပ်စစ်မီးစနစ်နဲ့ မြေအောက် စနစ်တွေ ကြိုတင် ချထားမယ့် အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်ကို လွှတ်တော်အမတ်တွေက လူမနေသေးရင် မြေအောက်စနစ်တွေ မလိုအပ်ဘူးဆိုပြီး ဝိုင်းကန့်ကွက်လိုက်ကြတာပါ။ လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် တနေ့မှာ နေပြည်တော်က နိုင်ငံခြားသံတမန်ရုံးတွေ ရန်ကုန်လိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။စနစ်ကျတဲ့ မြို့တစ်ခုရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဟာ ရေဝင်ရေထွက်၊ မိလ္လာနဲ့ မြေအောက်စနစ်ကောင်းဖို့ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်။ လူမနေသည်ဖြစ်စေ နေသည်ဖြစ်စေ အကွက်ချပြီး တနေ့မှာ တိုးပွားလူမယ့် လူဦးရေအတွက် မြေအောက်စနစ်တွေကို ကြိုတင် စီစဉ်ထားရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကို စတည်ခဲ့စဉ်က စနစ်ကျမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်ရော၊ အင်္ဂလိပ်ရောက ဗုံးတွေအပြိုင်ကျဲခဲ့ပါသေးတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်က လူပေါင်းစုံလာပါတယ်။ အခုဆို ၈ သန်းလောက်ရှိပါတယ်။ အခုချိန်မှ မြေအောက်စနစ်တွေ ပြန်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကို လွှတ်တော်အမတ်များ သံဝေဂယူကြပါ။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း အခြားမြို့ငယ်တွေကို ရန်ကုန်လိုမဖြစ်အောင် ပြင်ပ မြို့ပြအင်္ဂါရပ်တွေထပ် မြေအောက် ရေ/မီး/မိလ္လာစနစ်ကို တိုးလာမယ့်လူဦးရေအတွက် မျှော်တွေး ပြင်ဆင်ထားပါ။ တိုးလာမယ့် ကျောင်းသားဦးရေကို မျှော်ပြီး ကျောင်းတွေကို မြို့ပြင်ထုတ်တာ မှန်ပေမယ့် မြေအောက်စနစ်က အားနည်းပါသေးတယ်။မြို့တွေမှာ အခုလိုဖြစ်တော့ ဘယ်သူတွေအပြောခံရလဲ။ အရင်ဆုံး အစိုးရကို မြန်မာတွေ အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ ပြီးရင် အင်ဂျင်နီယာတွေကို အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ဘယ်သူမှ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ စကားပြောကောင်းရင် လွှတ်တော်အမတ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သင်္ချာအခြေခံရှိရင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးသိရုံနဲ့ မြို့တစ်မြို့ကို တည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို ဆေးကုလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဘွဲ့တွေ ရထားတာနဲ့ စစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ တတ်သိနားလည်တဲ့လူတွေကို ဦးစားပေးပါ။ မေးမြန်းပါ။ လွှတ်တော်အမတ်ထဲမှာ အင်ဂျင်နီယာ မပါတဲ့အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ တွေကို မလိုအပ်ရင် လွှတ်တော်မှာ မဆွေးနွေးဖို့နဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်း မိမိကိုယ်တိုင် အတွင်းကျကျသိရှိနာလည် လုပ်ကိုင်ဖူးတာ မဟုတ်ရင် မဆွေးနွေးမကန့်ကွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ နေရာတကာ ဆရာလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ပညာတတ်တွေလည်း နိုင်ငံခြားရောက်ကုန်မယ့်အပြင် တနိုင်ငံလုံးကမြို့တွေလည်း ရန်ကုန်လို ရေကြီးလာပါလိမ့်မယ်။ဦးဝင်းကြည် (စက်မှုတက္ကသိုလ်) .. www.MyanmarExpress.net
"ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်ရမယ့်အစား သူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသာ ကာကွယ်ချင်ဇောကြီးနေတယ်" - တပ်ကုန်း ရန်ပွဲ ME သုံးသပ်ချက်
ဒေါ်စုဟာ သူ့ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေသူတွေကိုပင် သဘောထားကြီးစွာ လက်ခံစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ ပုံရိပ်ကို လိုချင်ဟန်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် စိစစ်မေးခွန်းထုတ် ဆင်ခြင်ပြလိုက်တဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်သမီးနာမည်နဲ့ လုပ်စားရင်း တဖက်က ဆန့်ကျင်သူတွေကို တထိုင်တည်းနဲ့ သူ့ဖက်ပါအောင် စည်းရုံးနိုင်လိုက်လေသတည်း ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ချင်နေပုံ ရတယ်။ဒါပေမယ့် လောကကြီးက ဒေါ်စုထင်သလောက် မရိုးရှင်းဘူး။ ပိုဆိုးတာက ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်ကလည်း (သူ့ကိုယ်သူ ထင်ထားသလောက်) သဘောထားမကြီးနိုင်တဲ့အခါ အရုပ်ဆိုးတဲ့ သူတပြန် ငါတပြန် အော်ဟစ်ငြင်းခုန်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ဦးစန်းလွင်နဲ့ ဗီဒီယိုမှာ ဦးစန်းလွင်ဟာ ဒေါ်စုလုပ်တာတွေ မကြိုက်လို့ ဒေါသကြီးနေတယ်။ စကားလည်း ဒေါ်စုလို စီကာပတ်ကုံး မပြောတတ်ဘူး။ ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်လည်း သဘောထား မကြီးနိုင်တဲ့အတွက် စကားနိုင် လုပွဲကြီးလို ဖြစ်နေတယ်။ အဆိုဆုံးက ပြည်သူ့စကားမဆုံးခင် ဖြတ်ပြောတာနဲ့ စကားကို အကျအန ကောက်ပြီး သူ့ကို ထောက်ခံတဲ့ မီဒီယာတွေကို မှတ်ထားနော် လို့ ပြောတာပါပဲ။ ဒေါ်စုဖက်က ခေါင်းဆောင် တယောက်အနေနဲ့ မမှားသင့်တဲ့ အမှားတွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဥပမာတခုပြောရရင် ဗိုလ်ချုပ် ပင့်လာတဲ့ ဖက်ဆစ်တွေကြောင့် ဦးစန်းလွင်အဖေ သေရတာ ဆိုတဲ့အချက်ရယ်၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်တုန်းကလည်း ကျုပ် ခံခဲ့ရပြီးပြီ လို့ ဦးစန်းလွင်ပြောတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်စုဟာ ပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးစန်းလွင်ရဲ့ဘဝကို မျှဝေစာနာခံစားပြီး နားထောင်တာမျိုးထက် သူ့ဖေဖေကို ကာကွယ်ချင်ဇောတွေ၊ ၈၈ အရေးအခင်းကို ကာကွယ်ချင်တဲ့ ဇောတွေက များနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကြီးလည်း အောင်ဆန်း .. မင်းပင့်လာတဲ့ ဖက်ဆစ်တွေကို မင်းပြန်မောင်းထုတ် လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။) ဒေါ်စုဟာ သူတရားချနေတဲ့ လူတွေရဲ့ ဘဝကို စာနာနားလည်ဖို့ကြိုးစားတာထက် သူ့ရဲ့ ၅၉(စ) နဲ့ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသာ ကာကွယ်ချင်ဇောကြီးနေတာ၊ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေထူနေတာကို ဝမ်းနည်းစဖွယ် မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးက စိတ်ခံစားချက်တွေ မြင့်တက်လာပြီး အပြန်အလှန် အော်ဟစ်တာမျိုး အရုပ်ဆိုးတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ မြင်ရတာပါ။
နားထောင်ခြင်း အလေ့ဟာကောင်းတယ်၊ ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ ပြည်သူ့အသံကို၊ တဖက်သားအသံကို နားထောင်ရမယ် ဆိုတာကို ဒေါ်စုအနေနဲ့ စာပဲဖတ်ဖူးတယ်ထင်ပါတယ်။ စာဖတ်ထားတော့ အပြောပဲကောင်းပေမယ့် အလုပ်ကျတော့ လက်တွေ့မှာ အံဝင်ဂွင်ကျမရှိတော့တာ တွေ့ရတယ်။ "ပြည်သူ့အသံ နားထောင်ချင်တယ်" လို့ ပါးစပ်က ပြောပေမယ့် နားထောင်ခဲ့သမျှက သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေရဲ့ အသံတွေချည်းဖြစ်နေတာကြောင့် အသံနားထောင်တိုင်း အဆင်ပြေခဲ့တယ်။ NLD က သေချာ စီစဉ်ခဲ့တာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်ဦးလွင်သွားချိန်က အမျိုးသမီးတစ်ဦး က တွေ့ခွင့်တောင်းတာ မရခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၀ တုန်းက ဦးမင်းဆွေ တွေ့ခွင့်တောင်းတာ မရခဲ့ဘူး။ အခုလည်း ပြည်သူက အောက်က ပြောတာကို ကားပေါ်က နားထောင်တယ်။ ပြောတော့ ပြည်သူ့အသံနားထောင်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တဲ့။ အခွင့်ထူးမခံဖို့၊ လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူရဖို့ နဲ့ မျှတမှုရှိဖို့ အပြောဆုံးကလည်း သူပါပဲ။ အပြောနဲ့အလုပ်က တခြားဆီဖြစ်နေပါတယ်။ ဇန်လ ၁ ရက်နေ့ တပ်ကုန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရန်ပွဲကို Myanmar Express မှ သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် လူထုခေါင်းဆောင်ကို လူထုတစ်ရပ်လုံးက မထောက်ခံပါဘူး။
ပြည်သူတိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မချစ်ပါဘူး။ ဒေါ်စုပြောသမျှကို NLD ကလွဲရင် သာမန်ပြည်သူတွေက လက်ခုပ်တီးပြီး နားထောင်တာ မရှိဘူး။
ဒေါ်စုက ပြည်သူ့အသံနားထောင်ဖို့ထက် ပြည်သူကို စကားများများပြောဖို့ပဲသိတယ်။
ဒေါ်စု နားထောင်ချင်တဲ့ ပြည်သူ့အသံ ဆိုတာ သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေရဲ့ အသံသာဖြစ်တယ်။
ဒေါ်စုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူတိုင်းကို သူ့ဖက်ပါအောင် စည်းရုံးနိုင်မယ်လို့ အထင်ကြီးနေတယ်။
ဒေါ်စုဟာ လူထုနဲ့ တသားတည်းမရှိဘူး။
ဒေါ်စုဟာ အသက်အရွယ်နဲ့ မလျှော်ညီစွာ တဖက်သားစကားမဆုံးခင် ဖြတ်ပြောတတ်တယ်။
ဒေါ်စုဟာ ကိုယ်တိုင်က စကားမှားဖူးတာတွေရှိခဲ့ပေမယ့် သူများစကားကို အကျအန ကောက်တတ်တယ်။ ဒေါ်စုဟာ ပြည်သူကို လမ်းဘေးမှာထားပြီး ကိုယ်တိုင်က ကားပေါ်က မဆင်းပဲ စကားပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်။ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို အပြောပဲရှိပေမယ့် ကိုယ်တိုင်မကျင့်သုံးဘူး။ ဒေါ်စုဟာ ဒေါသထွက်လွယ်ပြီး တရားသိမှုအားနည်းတယ်။
ဒေါ်စုဟာ နာယကဂုဏ် (၆) ပါးနဲ့ မညီဘူး။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥက္ကဌက ရဲတွေ ပုဒ်မ တပ်လို့ရလား မရလားဆိုတာ မသိဘူး။
ဆုတွေ သောက်သောက်လဲ ရနေပေမယ့် ဒေါ်စုကို ပြည်သူအချို့ အထင်မကြီးကြဘူး။
၈၈ အရေးအခင်းကို လူတိုင်း မထောက်ခံဘူး။
၄၃၆ နဲ့ ၅၉(စ) ကို မပြင်ချင်တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။
ဒေါ်စု ဟာ မြန်မာလူထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်မဟုတ်။ စာဖတ်ပြီး အပြောကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်သည့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် ဒုက္ခရောက်၏။
အတွေ့အကြုံ အရည်အချင်း မရှိတဲ့ ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်သွားပါက ဒီထက် ဆိုးရွားတဲ့ ပဋိပက္ခများစွာ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ME မှ သုံးသပ်လိုက်ရပါသည်။
( သံကို သံချင်း ပျက်စီး ဖျက်စီးစေမယ့် သံချေးတက်တိုက်စားခြင်း မဟာဗျူဟာ )
တယောက်တမျိုး ငြင်းခုန် ရန်ဖြစ် ဂွတိုက်နေကြချိန်မှာOoredoo ကတော့ မကြာခင် ခေတ်ပညာတတ် မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ် ၃၀၀၀၀ ကိုဇကာတင် ခေါင်းခေါက်ရွေးပြီး ပညာတော်သင်အဖြစ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့စေတနာထက်သန်စွာဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဇကာတင်ရွေးမှတော့ စောက်ရုပ်ဆိုး အိုကြီး အိုမတွေတော့ ဘယ်ခေါ်မလဲကွယ်
လက်တလော အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဗြောင်းဆန် သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကတော့ ဗိုလ်မှူးစိုးမြင့် ရဲ့ သမီး စိုးမြတ်သူဇာ နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ကိုကိုရဲ့ သမီး နဝရတ် တို့ရဲ့သမီးတို့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖေက စစ်သားတွေဖြစ်တာကြောင့် ဝိုင်းဝန်းအပြစ်တင်မှုတွေ ဆက်တိုက်တွေ့လာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ၂ ယောက်လိုပဲ စစ်သား သမီးဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေးထက် သုံးစွဲတာထက် ဆိုးတဲ့ လူကိုတော့ အပြစ်တင်ဖို့ မေ့နေကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရဲ့ သမီး ရဲ့ အမျိုးမစောင့်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းပါ။ ဗိုလ်မှူးသမီး စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး သမီး နဝရက် တို့က မူးယစ်ဆေးနဲ့ တစ်ချိန်က ပတ်သက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် သားသမီး တာဝန်ဝတ်တရားဖြစ်တဲ့ အမျိုးစောင့်ခြင်း တာဝန်ကိုတော့ ကျေပွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ် သမီး ဒေါ်စုကြည် ကတော့ နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထက် ပေါင်းသင်းခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူး နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး သမီးတို့ တစ်ချိန်က မှားခဲ့တာက အခုချိန်မှာ ပြင်လို့ ရသွားပြီ ဖြစ်ပေမယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး ဒေါ်စုကြည် မှားခဲ့တာကတော့ တစ်သက်လုံးပြင်လို့မရအောင် မျိုးဆက်ပျက်ခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးမြတ်သူဇာ နဲ့ နဝရတ်တို့ ၂ ယောက် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးတာက သူတို့ ဘဝ နဲ့ သူတို့ မိသားစုနဲ့ ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံခြားသား ကို အိမ်ထောင်ပြုတာက သူ့မိသားစုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ကာ မျိုးဆက်ပျက်သွားတဲ့အပြင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပုံရိပ်၊ စစ်တပ်ရဲ့ ပုံရိပ် နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အများကြီး ပိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်မှုး နဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် အများကြီး ကွာသလို အနုပညာသည် တွေကလည်း နောက်တစ်ဆက် သမ္မတလုပ်မယ့်လူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် အများကြီး ကွာလွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မတလုပ်မယ့်လူရဲက အမှားက အနုပညာသည်တွေ အများထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုဆိုးလွန်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြင်လို့ရတဲ့ အမှားကို ကျူးလွန်ခဲ့သူက သုံးယောက်ထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးသူ ဖြစ်နေပါတယ်။ တသက်လုံးပြင်မရတဲ့ အမှားကို မှားခဲ့တဲ့ သူကိုသာ သမ္မတတင်လိုက်ရင် တနိုင်ငံလုံး ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပါ။
၃ ဦးလုံးရဲ့ အမှားတွေကတော့ လူငယ်တွေ အတုမယူသင့်တဲ့ အမှားတွေဖြစ်ပါတယ်။ စိုးမြတ်သူဇာ နဲ့ နဝရတ် တို့လို မူးယစ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်တာကို လူငယ်တွေ အတုမယူသင့်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ မျိုးမစောင့်တာကိုလည်း လူငယ်တွေ အတုမယူသင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ နဝရတ်တို့ အမြင်မှန် ရသွားတာကိုတော့ အများကြီး အတုယူသင့်ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြင်မရတော့တဲ့ ဒေါ်စုအမှားကိုတော့ သံဝေဂ ယူသင့်ပါတယ်။ အနုပညာသမား ငရုတ်သီး တွေ စစ်တပ် ကြက်သွန်နဲ့ ပေါင်းပြီး အထောင်းခံရသလိုပဲ အခုလောလောဆယ် စစ်တပ် ကြက်သွန်နဲ့ အတင်းပေါင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ငရုတ်သီးမ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကိုတော့ ထောင်းဖို့ မေ့နေကြပြန်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ မှားဖူးပေမယ့် ပြင်လို့ရတဲ့ အမှားကို မှားတာက တသက်လုံးပြင်မရတဲ့ အမှားကို မှားခဲ့တဲ့လူထက်စာရင် အများကြီးကောင်းပါသေးတယ်။ .. www.MyanmarExpress.net
From : .... Ko Zay
ကျောင်းနား မှာ ဆေးလိပ် ဆေးရွက်ကြီး ကင်းစင် နယ်မြေ ဆိုတာ လူကြီးပြောင်းသွားလို့ ဆောင် ပုဒ်ပါ တစ်ခါတည်း သူ့နောက်ပါသွားလေရာ့သလား မ ပြောတတ်ပါဘူး။
ဒီအထဲက တစ်ပုံကို အိတ်ပိတ်ပြီး အဲ့ဒီကျောင်းက အတန်း ခေါင်းဆောင် ဆရာလက်ထဲလည်း ထည့်ပြီးပါပြီ။ အ ထောက်အထား ယူပေးတဲ့ ကိုယ့်ကို တောင် ပြန် ရန်လုပ်ချင် တဲ့ပုံပဲ ပြောပုံက ဒီပုံ ဘယ်သူရိုက်တာလဲတဲ့။
ဒါ ကျောင်း ကို သိက္ခာချတာဆိုလားဘဲ ။ တလ ကျော်သွားပါပြီ ဘာမှထူးမလာပါဘူး ။
ကျောင်းနားက ဆိုင်တွေက တော့ ဆေးလိပ်ကို ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေကို ရောင်းဆဲပါဘဲ။
အ ကြွေအမ်း တာတောင် ငါးဆယ် မရှိလို့ ဆေးလိပ်ယူသွားတဲ့ဗျာ နားနဲ့ ဆက်ဆက် ကိုကြားတာပါ။ ပထမတော့ က လေးက မယူပါဘူး။ နှစ်ခါလောက်ပြောတော့ သူလည်း ယူသွားရှာတယ။်
ဒီအချိန်မှာ သွားပြောရင် ရန်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့။
ဖြစ်စေချင် တာက ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေကို ကျောင်းသား သူတွေကို
ဆေးလိပ် မ ရောင်းဖို့သတိပေးလို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း ဆေးလိပ် သောက်တဲ့ က လေးကို သိတာနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အ ရေးယူမယ်လို့ သတိပေးလို့ ဒီလိုလေး ဖြစ်စေချင် တာပါ။
တစ်လ သာကျော်သွားတယ် မထူးလာဘူး ဒါ့ကြောင့် ဖွဘုတ်မှာ တင်ပြီး ဖွတယ် လို့သာမှတ်ပေါ့ဗျာ။ ခေတ်မှီလာပြီနော် ကိုရီးယားမ တွေ လိုပဲ နောက်ဆို အရက်ဆိုင် ပါထိုင်တော့မှာ ရင်လေးပါတယ်ဗျာ အဲဒီအချိန် ရောက်မှာနဲ့ ကျုပ်သမီး အဲ့ဒီ့အရွယ် ရောက်မှာနဲ့က တော့ ကွက်တိပဲ အမြင် မ တော်သူများ များများရှဲပေးကြပါဗျာ အမြင်တော်ရင်တော့လည်းတတ်နိုင် ဘူး ကျောင်းနာမည် သိချင် သူများ ချက်ဘောက်မှတဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မေးမြန်းဆုံစမ်းခြင်းကို ဒလ ဟော ခွင့်ပြုပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်ထုတ်ခဲ့သည့် ၉၃ နှစ်အရွယ် သခင်လှကြိုင် ပဲခူးတံတားပေါ်တွင် တောင်းစားနေ
ပဲခူးတံတားပေါ်မှာ ပိုက်ဆံတောင်းစားနေရရှာတဲ့ တော်လှန်ရေးရဲဘော်ကြီး။ပဲခူးတံတားပေါ်မှာ ပိုက်ဆံတောင်းစားနေတဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုအင်တာသွားဗျူးတာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မေး။ ။အဘနံမည်ဘယ်လို ခေါ်ပါသလဲ?အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ?ဖြေ။ ။သခင်လှကြိုင်ပါ။အသက်က ၉၃ နှစ်ကွဲ့။မေး။ ။အဘကစစ်မှု့ထမ်းဟောင်းလား?ဖြေ။ ။တော်လှန်ရေးရဲဘော်ပါ။ဗိုလ်ရန်နိူင်ရဲ့ တစ်ပည့်ပါ။မေး။ ။ဘယ်မှာနေလဲ ?ဘယ်သူနဲ့နေလဲ?ဖြေ။ ။အိုးလေးစုထဲမှာနေတယ်။မုဆိုးမသမီးနဲ့ မြေးနဲ့နေပါတယ်။မေး။ ။ဘာလို့ပိုက်ဆံတောင်းတာလဲ?ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ?ဖြေ။ ။အဆင်မပြေလို့ပါ။ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။မေး။ ။နိူင်ငံတော်က မထောက်ပံဘူးလား?။မော်ကွန်းဝင်လက်မှတ်တွေဘာတွေ မရှိဘူးလား?ဖြေ။ ။မထောက်ပံပါဘူး။ဦးနေ၀င်း ပေးခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ပြုလွှာတော့ရှိပါတယ်။မေး။ ။မျက်စီတစ်လုံးက ဘာဖြစ်တာလဲ?။ဖြေ။ ။မမြင်ရတော့ဘူး။မေး။ ။တစ်နေ့ဘယ်လောက်ရလဲ?။ဖြေ။ ။သုံးထောင်လောက်ရပါတယ်ကွယ်။( သခင်လှကြိုင်၏ နေအိမ်နှင့် သူ့ပုံများ )Posted by Kyi Linn
ခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တစ်ယောက်တည်း လုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့မျိုးချစ်
တော်လှန်ရေးသမားတွေ အများအပြား အသက်ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ပြီး လက်နက်ကိုင်
တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အခု လွတ်လပ်ရေးရချိန်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ လူတစ်စုကိုသာ အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး အသက်မရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ ငွေကုန်ခံ ပန်းခွေတွေချ၊ ဗိမ္မာန်တွေလုပ်ထားကြပါတယ်။ တစ်ချိန်က တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး အသက်မသေပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေကတော့ တောင်းစားနေရပါတယ်။ သခင်အောင်ဆန်း အရှိန်နဲ့ သမီးစုကြည် ကို လူတွေက သမ္မတလုပ်ခိုင်းနေကြပြီး သခင်လှကြိုင်တို့တောင်းစား တာကိုတော့ ကြည့်နေကြပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိလို့ တီဗွီမကြည့်ရ၊ ပန်ကာမဖွင့်ရတဲ့ လူတွေအတွက် ၅ ယောက်တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံ အဖွဲ့ပေါင်းစုံက လက်တွေ ဖယောင်းရည်အပူခံပြီး ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေလိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့ဆန္ဒမပြရဲကြပါဘူး။ လစာ
၆ သိန်းလိုချင်ပြီး လွတ်လပ်ရေး ဘယ်လိုရခဲ့လဲ့ မသိဘဲ မနေ့တနေ့ ကမှ ဒီမိုကရေစီထအော်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက လျှပ်စစ်မီးအတွက် တင် သွင်းကြ၊ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ မိမိတို့ကို လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ သခင်လှကြိုင် တောင်းစားနေ တာကိုတော့ လစ်လျူရှုထားကြပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ဆန္ဒပြအဖွဲ့များ နဲ့ ပြည်သူများအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတစ်ယောက်တည်းကို အာဇာနည်သူရဲကောင်းလို့ မထင်ကြပါနဲ့၊ ရန်ကုန်လူထု တစ်ခုတည်းကို မြန်မာလူထုလို့ မထင်ကြပါနဲ့ တောင်းစားနေသူ၊ ဆင်းရဲမွဲတေနေသူ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် သက်ရှိ အာဇာနည်များကို ဦးစားပေး ကြပါ။ လျှပ်စစ်မီးဆိုတာ လုံးဝမမြင်ဖူးသေးတဲ့ မြို့ငယ်များ၊ ကျေးရွာများ ကို ဦးစားပေးကြပါ။ သေသွားတဲ့ လူတွေအတွက် ကုန်ကျမယ့် ပန်းခွေတွေ၊ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ အစား သက်ရှိ ဆင်းရဲသူများကို ပေးကြပါ။ မိမိတို့ ပိုပေးလိုက်ရတဲ့ အလှူငွေကြောင့် မှောင်မဲနေတဲ့ ရွာတွေမှာ မီးချောင်း တစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်း လင်းသွားတယ်ဆိုတာ ပီတိဖြစ်စရာပါ။ ပုံမှန် ၃ ချောင်း ထွန်းထားတာကို တစ်ချောင်းပိတ်လိုက်ပြီး မလင်းသေးတဲ့နေရာတွေကို တစ်ချောင်းပေးထွန်းလိုက်ပါ။ သူတို့တွေ ကျေးဇူးတင်နေကြပါလိမ့်မယ်။
Dr. Myo Chit
၁။ ဘုန်းကြီးများသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပုံကို ကိုင်ဆောင်ပြီး မြို့တွင်းလမ်းလျှောက်လည့်လည်ခြင်း။
၂။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများမှာ စကားဝဲ၍ ဗမာစကား မပီကြခြင်း။
၃။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများမှာ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်နေခြင်း။
၄။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများမှာ အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ ကြား ဖြစ်နေကြခြင်း။
၅။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများမှာ ၁ ဝါ မှပင် မရှိသေးခြင်း။
၆။ အချို့ဘုန်းကြီးအများစုမှာ သိမ်မဝင်ရသေးခြင်း။
၇။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများသည် ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် ဟူ၍ နာမ်စားများဖြင့် ထူးဆန်းစွာ စကားပြောကြခြင်း။
၈။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများက လက်သီးလက်မောင်းများတန်းပြီး ထူးဆန်းစွာဖြင့် ဒေါသ မောဟ များ ဖုံးလွမ်းရေး တရားများ ဟောနေကြခြင်း။
၉။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများတယ် အကြမ်းဖက်သမားများကဲ့သလို့ ထူးဆန်းစွာဖြင့် မျက်နှာဖုံးများ တပ်ဆင်ထားခြင်း။
၁၀။ ဦးဆောင်သော ဘုန်းကြီးများမှာ ဆန္ဒပြပွဲပြီးသည်နှင့် အချိတ်ဆက်ကောင်းကောင်းဖြင့် ထူးဆန်းစွာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေခြင်း။ ၁၁။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများ၏ လွယ်အိတ်များထဲတွင် လောက်လေးဂွ များနဲ့ လောက်စာလုံးများ ထူးဆန်းစွာ ရှိနေခြင်း၊
၁၂၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများသည် သူဘာသူနေသော ကားမှတ်တိုင်များနှင့် ရင်ထိန်းရဲ ရုံးများရှိမှန်များကို ထူးဆန်းစွာ ခွဲပစ်ကြခြင်း။
၁၃။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများသည် အဝေးရှိ စစ်သားများကို ထူးဆန်းစွာ အော်ဟစ်နောက်ပြောင်ခြင်း၊ ဖင်လှန်ပြခြင်းနှင့် ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခြင်း။
၁၄၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများသည် စစ်ကားများလာရာလမ်းတွင် ထူးဆန်းစွာဖြင့် သံချွန်များ ချထားခြင်းနှင့် ကားမှန်များကို ပစ်ပေါက်ခွဲခြင်း။
၁၅။ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူအချင်းချင်းနိပ်စက်ခြင်းကို မလိုလားသူများက တိုက်ပေါ်မှနေ၍ လမ်းပေါ်ရှိ ရဲနှင့် စစ်သားများပေါ်သို့ အက်ဆစ်ရည်များ၊ ရေနွေးပူများနှင့် အခြား အလေးချိန်စီးသော ပစ္စည်းများကို ထူးဆန်းစွာ လောင်းချ၊ ပစ်ချခြင်း။
အိန္ဒိယ လူထုခေါင်းဆောင် နှင့် မြန်မာ လူထုခေါင်းဆောင်
ဆိုနီယာဂန္ဒီ - အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်
ဒီလို ခရီးသွားဧည့်သည်မျိုးကို ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ?
From : ..Luděk Wellart (model)
ကျွန်မအတွက် ကတော့.... ဧည့်သည် ဆိုတာ အိမ်ရှင်ဆီ အလည်လာရင် အိမ်ရှင် စည်းကမ်း အတိုင်း လေးစား လိုက်နာသင့် တယ်လို့ထင်တယ်... ဘာသာတရား ယုံကြည်တာ မကြည်တာ အပထားအုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့နေရာကို မထေမဲ့မြင် မပြုသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်... ငယ်ပါဖုံး ရုံလောက် အ၀တ်အစားနဲ့ နယ်ခံ မိန်းမသားတွေရှေ့မှာ ယခုလို ပြုမူတာဟာလဲ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ... နယ်ခံတွေက ဧည့်သည် ပဲလေဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးထားတာကိုတောင် သူတို့ ဘလော့မှာ "Most of them was really exited about our ideas!" လို့ ထင်သွားကြတယ်.... အဲဒါကို သူတို့ က အနုပညာတဲ့.... ဒီလို ခရီးသွားမျိုးကို အမှန်တော့ သက်ဆိုင်ရာက Fine ကောက်ပြီးတောင် အရေးယူသင့်တယ်... မြန်မာပြည် အလည်လာသူများလာတာနဲ့ အမျှ ဒီလိုမျိုး သရုပ်ပျက် tourist တွေကိုလဲ ထိမ်းချုပ်ဖို့ စည်းကမ်းတွေထားသင့်တယ်... အဖြူဖြစ်တာနဲ့ မလွှတ်ပေးသင့်ဘူး.. .. www.MyanmarExpress.net
From : ..သီဟသစ် .
ဘယ်မွတ်စလင်မှာ ခေါင်းဖြတ်ဖို့ ၊ အသေခံဗုံးခွဲဖို့ သင်ပေးတဲ့ ဗလီဆရာကို အဆိုး မမြင်ပေမယ့် သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ သွန်သင်တဲ့ ရဟန်းကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ ကိုယ့်ဘာသ တံဆိပ်တပ်တဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ တီးမိခေါက်မိတာ ၃ နှစ်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးကို သိပ်နားလည် တတ်ကျွမ်း တဖက်ကမ်းခတ်နေတဲ့ နိင်ငံ ။ မွတ်စလင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ နိင်ငံရေးသမားတွေ စုဝေးနေတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။သန်း ၁၆၀၀ ကျော်တဲ့ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေရဲ့ ၂၃ % မွတ်စလင်တွေ အတွက် အမြဲ စိုးရိပ်ပူပန်နေတတ်ပြီး ကိုယ့်နိင်ငံက ကိုယ့်သံဃာကို ဝေဖန်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ပါးစပ်မနှေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေ ပေါများတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။၂၀၀၇ မှာ Hand Speaker ကိုင်ပြီး လက်သီးလက်မောင်း တန်းခဲ့တဲ့ သံဃာတွေက ဝိနည်းနဲ့ ညီခဲ့ကြ ၊ သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၃ မှာ ကိုယ့်သာသနာ မပျောက်ကွယ်အောင် ၊ ဘာသာခြားဝါးမျိုမှု အခြေအနေကို သိအောင် သွန်သင်နေတဲ့ သံဃာတွေကိုတော့ ဗီလိန် တံဆိပ်ကပ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။သံဃာကို ဗလီထဲသွင်း လည်လှီး မီးရှို့ခံရတာက သာမည ၊ စစ်ဖိနပ်အောက် ရောက်မှာ မကြောက်ဖူးလား ဆိုတာက အဓိက ၊ နောက်လှည့်သွားလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အမြဲခြောက်လှန့် ခံနေရတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေ အင်္ဂလန်မှာတောင် ခရစ်ယာဉ်သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ အဖွဲ့ ရှိပေမယ့် မနေ့တနေ့ကမှ ဒီမိုကရေစီ ကြားဖူးပြီး ကိုယ့်သာသနာ ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အဖွဲ့ကိုမှ မြောင်းထဲထည့်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ နိင်ငံရေး အရေခြုံပြီး သမ္မတရူးနေတဲ့ ဝံပုလွေတွေ ကောင်းစားနေတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။NLD မဲမနိင်မှာ သေမလောက် ကြောက်ပေမယ့် ၊ သာသနာ ပျောက်မှာကိုတော့ သွားကြားတောင် မညပ်တော့တဲ့ ၊ တမွန်းတည့်နေတဲ့ ခွေးရူးတွေ အမြဲ အူနေတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။နိင်ငံတကာမှာ တောင်းစား ၊ နိင်ငံသားစိတ်ပျောက် ၊ ကိုယ့်အိတ်ကပ် ဖောင်းဖို့ဆို တိုင်းပြည်ကို မီးမြှိက်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ အသားထဲက လောက်တွေ ပေါလွန်းတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ ပေတံကို ယူသုံး ၊ ၅ လက်မ ၁ ပေ အတိုင်းအတာနဲ့ သာသနာနှစ် ၅၀၀၀ ထောင်ကို ခပ်စောစော ပြာချ ချင်တဲ့ နာမည်ကောင်းကို မစင်လို မက်တဲ့ ခွေးလို နိင်ငံရေး သမားတွေ တော်သလင်း ရောက်နေတဲ့ နိင်ငံ ။ အဲ့ဒါ မြန်မာနိင်ငံ ။ထွီ !!!!!!!!!!!!!. www.MyanmarExpress.net
မြန်မာနိုင်ငံ မုန်တိုင်းမကျမီ နှစ်ရက်အလို သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲ?
သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတများ နှင့် ဝန်ကြီးများ ပြည်သူကို ကယ်ဆယ်ဖို့ အစည်းအဝေးလုပ်နေကြသည် (၁၄.၅.၂၀၁၃)
တစ်ခါမှ အကောင်းပြောမခံရတဲ့ စစ်သားများက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နေကြသည် (၁၄.၅.၂၀၁၃)
လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူ ရော ဘာလုပ်နေလဲ ဗျို့?
မုန်တိုင်းကျတော့မှာမို့ တစ်နိုင်ငံလုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတာပဲ
လူထုခေါင်းဆောင်လည်း လူထုအတွက် တစ်ခုခု လုပ်နေမှာပေါ့
ဆုတွေအများကြီးရထားတဲ့ တစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ နိုဘယ်ဆုရှင်လေ.. အကောင်းဆုံးအလုပ်ကို လုပ်နေလိမ့်မယ်
?????????? (၁၄.၅.၂၀၁၃၊ မြန်မာနိုင်ငံ မုန်တိုင်းမကျမီ ၂ ရက် အလို....)
တိရိစ္ဆာ ငန်း နှင့် အလှပြိုင်သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း
From : ..http://www.oppositeyes.info/2013/04/blog-post_9156.html
ငါတို့ မြန်မာပြည်ဝယ် မိဘတိုင်းကကွယ်.. ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်းတွေ မွေးရမယ် ဆိုတဲ့ သီ ချင်းလေး က ကျွန်တော်တို့ နားထဲမှာ တကယ်ကို စွဲထင်နေပါတယ် ဗိုလ်ချုပ်။ ကိုယ်တိုင်က ဗိုလ်ချုပ်လို သူ ရဲကောင်း မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မြင်းစီးကြေးရုပ်ကြီး အထက်မှာ ခပ်မတ်မတ် ရှိနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ကြေးရုပ်ကြီးတွေ မြင် တိုင်း ကြက်သီး ထခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဓားကို ထောက်လို့ ရပ်နေတဲ့ တည်ကြည်ပြတ်သားဟန် အပြည့်နဲ့ ဗိုလ် ချုပ် ရုပ်ထု တွေကို
မြင်တိုင်းလဲ တိုင်းပြည် အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ပေးဆပ်မှုတွေကို ဦးညွှတ်ဂါရ၀ ပြုလျှက်ပါပဲ..
ဗိုလ်ချုပ်တို့ ၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၁၉ မှ ကျဆုံးသွားတဲ့ အချိန်ကစပြီး ၄၂ အကြာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ ဗိုလ် ချုပ် ကို ကျွန်တော်တို့ နေရာအနှံ့မှာ ပြန်ပြီး တွေ့လာခဲ့ကြတယ်။ နေရာအနှံ့မှာ သမီးရဲ့ မဲဆွယ်ပွဲကို လိုက်ပြီး ကူညီပေးနေရတဲ့ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက်ကိုလည်း မြင်တွေ့နေခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံရေး သမားတွေ အ သုံး ချချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောပြော မပြောပြော ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တယ် ဆိုပြီး လုပ်စားနေလို့ ဗိုလ် ချုပ် နာမည် ကို ရင်းနှီးသထက် ပိုပြီး ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည်ကြီး က ခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လက် နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကတောင် ဗိုလ်ချုပ်ကို အသုံးချနေကြတာ မြင်ရတော့ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ထုတွေ မြင် တိုင်း ကျွန်တော် စကား တစ်ခွန်း တိုးတိုး ပြောမိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တော့ လူမရှိတော့မှ အသုံးချခံနေရပြီ
အစိုးရ သစ် မတိုင်ခင်က ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို တီရှပ်လုပ်ဝတ်၊ ရောင်းတန်းဝင် ဈေးကွက်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ လုပ်တဲ့အလုပ်က မင်းမဲ့စရိုက် ဆူပူဖို့၊ အကာအကွယ် ယူတာ က ဗိုလ်ချုပ် ဓာတ်ပုံ
တီရှပ်နဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ တပ် မတော် စစ်ကြောင်း၊ တပ်ခွဲတွေမှာ အောင်ဆန်း စစ်ကြောင်း၊ အောင်ဆန်းတပ်ခွဲ ဆိုတာတွေ တွေ့ရတော့မှ ရဲရင့်ပြတ် သား ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ပုံရိပ် အစစ် အတွက် ဂုဏ်တင့်နိုင်ခဲ့ကြရတယ်။
တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကို အသုံးချလာကြတာတွေက ဒီ ၂၀၁၃ ဆိုတဲ့ကာလမှာတော့ အထူးခြားဆုံး ဖြစ် ခဲ့ပြီ ဗိုလ်ချုပ်ရေ။ ရိုက်လို့ မကုန်၊
ရောင်းလို့ မလောက် ပါတီကြီး တစ်ခုရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ဗိုလ်ချုပ်က ရှာပေး ခဲ့တယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ၊ ကားတွေပေါ်မှာ၊ နေရာတကာမှာ ဗိုလ်ချုပ် ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ဒါတွေထက် ပိုပြီး ထူးခြားတာကတော့ ကားကြီးရဲ့ ရှေ့မှာ ခန့်ခန့်ကြီး ထိုင်စီးလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် သင်္ကြန် လည်နေ ပါရော့လား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး၊ လွတ်လပ်ရေးကို အရယူပေးခဲ့တဲ့ တပ်မတော် သား ကြီး တစ်ယောက် သင်္ကြန်ကားရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာ ငွေငန်းကြီး တစ်ကောင်နဲ့ အပြိုင် သင်္ကြန်လည်နေ ပါပေါ့ လား ဗျာ။
ဗိုလ်ချုပ်ရေ။ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ဘုံဘ၀ကနေ ဒါတွေကို မမြင်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်ဗျာ။
သမ္မကြီးကို ကြိုဆိုသူတွေ များပြားနေခဲ့ လို ကြည်နူးလွန်းလို့မျက်ရည်ဝဲ မိပါတယ် Friday, March 08, 2013
From : မုန်းမြို့ သူ
ဒီနေ့ ကျမ တို့ နိုင်ငံရဲ့ သမ္မကြီး ....နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်မှ အမိမြေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ ပါပြီ ။ကြိုဆိုကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ ပြည့်နှက်နေခဲ့ တယ် ။သမ္မတကြီး ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ပင်ပန်းမှု့ တွေ ပြေပျောက်ပြီး ....၀မ်းသာကြည်နူးနေမယ်ဆိုတာ သေချာလို့ နေပါတယ် ။ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ဘယ်လိုပဲ အပြစ်တင်ဝေဖန်နေပါစေ....ကျမ တို့သမ္မတကြီးကတော့နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသာ ..လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာ ရင်ထဲကနေ ယုံကြည်ပြီးသားပါ။ပေးဆပ်မှု့ ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေခဲ့ ပြီးသားပါ ။ဘယ်အရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေးဆပ်တစ်ခု မရှိပဲ နဲ့ တော့ အလကား မရနိုင်ပါဘူး ။တစ်ခုထက်ပိုသော ပေးဆပ်မှု့ တွေ ကိုသာ ရင်းနှီးမြှပ်နှီပြီးခဲ့ တော့သာ .....ရသင့် ရထိုက်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ထိုက်တန်စွာ ရရှိခဲ့ လာခဲ့ တာပါ ။" ၀မ်းသာဝမ်းနည်း မျက်ရည်ဝဲ " ဆိုသလို ..ဒီကနေ့သမ္မကြီးကို ကြိုဆိုသူတွေ များပြားနေခဲ့ လို ကြည်နူးလွန်းလို့ မျက်ရည်ဝဲ မိပါတယ် ။ဒီကနေ့နဲ့ ပတ်သပ်ပြီး တင်ခဲ့ ကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီကနေ့ မှ ကျမမြင်ခဲ့ ရတဲ့ ပို့ စ် တစ်ချို့ ကြောင့် ပုတ်ခတ်မှု့ တစ်ချို့ ကြောင့် နစ်နာစေလိုသော စိတ်ဆန္ဒနဲ့ တင်ပြထားကြတဲ့ပို့ စ် တစ်ချို့ တွေ ကြောင့် တကယ့် ကို မျက်ရည် ၀ဲ ရပါတယ် ။လူဆိုတဲ့ အမျိုးကတော့ အခွင့်အရေးဆိုတာကြီးကို ..." ရလေ လိုလေ အိုတစ္ဆေ " ဆိုသလို ပါပဲလေရောက်နေတဲ့ နေရာ ရရှိနေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်သူမဆို ပြည့်ဝစွာအသုံးချချင်ကြမှာပါပဲလေ ။ဘာမှကို ဆက်မပြောချင်တော့ လောက်အောင်ကို လည်း စိတ်ပျက်သွားပါပြီ ။အတိုက်အခံ လည်း မငြင်းခုန်ချင်တော့ ဘူး ။နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွှက်လို့ချီးကျူးစရာ မလိုဘူး ။သူ သမ္မတ မို့သူ့ တာဝန် သူ လုပ်တာတဲ့ လား ?သမ္မတ ရိုးရိုးတန်းက လေယာဉ် စီးတာ မထူးဆန်းပါဘူးတဲ့ ?( တစ်ချို့ အရာတွေကို ပြောဖြစ်တာပါ )သြော် ....... ကျမ ရင်ထဲ ......... ????အတွေးပေါင်းများစွာ စိတ်ပျက်မှု့ ပေါင်းများစွာ နဲ့ပဲ ...........အချိန်တန်ရင် ... အမှန်တရား ဆိုတာ မြင်သာနိုင်ကြပါစေလို့ သာ !
တရုတ်က မြန်မာဘိန်းဘုရင်ကို ဆေးထိုးပြီး ညှင်ညှင်သာသာ သတ်တယ်၊ ကုလားက အပစ်မဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သတ်တယ်
တရုတ်က မြန်မာဘိန်းဘုရင်ကို ဆေးထိုးပြီး ညှင်ညှင်သာသာ သတ်တယ် ဟုဆိုကာ မကျေမနပ် ဆူညံနေသော မြန်မာများသည် ကုလားက အပစ်မဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူများကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သတ်ချိန်က ကုလားဖက်လိုက်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်နေသည်ကို ထူးဆန်းစွာတွေ့ရသည်။
တရုတ်သည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကို မဖျက်ဆီးပါ။ ကုလားသည် အားလုံးဖျက်ဆီးနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့တိုင်းတွင် တရုတ်ဘုံကျောင်းမရှိပါ။ ဗလီ များကတော့ မြို့လည်များတွင် သင်တို့တွေ့နိုင်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်၊ ကုလားများသည် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်တို့သည် မြန်မာဘုန်းကြီးများကို ရှိခိုးကြသည်။ ကုလားများသည် မြန်မာဘုန်းကြီးများကို သတ်ဖြတ်ကြသည်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တို့၏ သတ်ဖြတ်မှု၊ မီးရှို့မှုကြောင့် ၂၀၁၂
မေလ ၂၈ ရက်မှ ဂျွန်လ ၁၄ ရက်နေ့အထိ သေဆုံးသူ ၅၀၊ ထိုခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၅၄ ဦးရှိပြီး အဆောက်အအုံ ၂၂၃၀ လုံး ဆုံးရှုံးကြောင်း အစိုးရသတင်းစာများက ကြေညာခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် သပြေချောင်ကျေးရွာနေ ဦးလှတင်+ဒေါ်မမြတို့၏ သမီး မသီတာထွေးသည်(အသက်၂၆နှစ်) မွတ်ဆလင်ကုလားများ၏ မုဒိန်းကျင့်ကာ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
စစ်တွေ ၊ ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသနေ ရခိုင်စကားပြော မရမာတိုင်းရင်းသူ မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်သည့် သောင်းမချေ (Thomaching) မှာ ဘင်္ဂါလီရွာတစ်ရွာအနီးတွင် မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
(၁၀.၂.၂၀၁၃) (တနင်္ဂနွေနေ့) (၁၂း၃၀) အချိန်က မောင်တောမြို့နယ်၊ ငခူရမြို့သစ်ရွာမှ ရခိုင်အိမ်တစ်အိမ်သို့ ဘင်္ဂါလီကုလား (၁၇) ဦးခန့် ဓားများ၊ သေနတ်များဖြင့် ၀င်ရောက်အကြမ်းဖက်ရာ ထိုရခိုင်အိမ်တွင်နေထိုင်သူတစ်ဦးမှာ နေရာတွင်ပင် အသက်ပျောက်သွားခဲ့သည်။ ထိုအိမ်တွင် နေထိုင်သော အခြားရခိုင်တစ်ဦးမှာ (သေနတ်၊ ဓား) ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိသွားခဲ့သည်။ သေနတ်သံကြားသဖြင့် အနီးအနား ရခိုင်အိမ်များမှ ကူညီရန် ရောက်လာသူ (၂) ဦးကိုလည်း ဘင်္ဂါလီကုလားများက သေနတ်ဖြင့်ပစ်၊ ဓားနှင့်ခုတ်ရာ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရသွားခဲ့ပြန်သည်။ ၎င်းတို့ (၄) ဦးအနက် အသက်ရှင်လျှက်ရှိသေးသော ရခိုင် (၃) ဦးကို မောင်တောမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ ယနေ့နံနက် (၃း၃၀) ခန့်တွင် ပို့ဆောင်ဆေးကုသပေးလျှက်ရှိသည်။ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရ ရခိုင် (၄) ဦးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဦးအေးမောင် (အသက် (၅၀) ကျော်) (နေရာတွင် သေနတ်၊ဓားဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး)
၂။ ဦးသာတင် (အသက် (၅၀) ကျော်) (ဦးအေးမောင်နှင့် အတူနေသူ၊ ဒဏ်ရာပြင်းထန်)
၃။ ဦးစောညွန့်အောင် (အသက် (၃၉)နှစ်) (ဒဏ်ရာပြင်းထန်)
၄။ ကိုရွှေထွန်းအောင် (အသက် (၂၃) နှစ်) (ဒူဆစ်အောက်နား သေနတ်ကျည်ဆန် ထိမှန်)
သေနတ်သံကြားသဖြင့် (၁၅) မိနစ်ခန့် ဆိုင်ကယ်မောင်းရသော အကွာအဝေးတွင် ရှိသည့်
နစကစခန်းမှ စစ်သားများက ငခူရမြို့သစ်ရွာသို့ လိုက်လာကြရာ ကုလားများက ဒိုးတန်း(ကုလား)ရွာအတွင်းသို့ ၀င်ပြေးသွားကြသည်။ စစ်သားများက ၎င်းတို့နောက်မှလိုက်သွားရာ ဒိုးတန်းရွာအနီး တောင်ပေါ်သို့ ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်း ရွာခံကုလားများက ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ အိမ် (၂) ဆောင်တည်းသာ ရှိသော ပီအေရွာမှ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် ရခိုင်လူငယ်တစ်ဦးကို ကုလား (၁၀) ဦးကျော်ခန့်က ကြိုးဖြင့်တုပ်၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့ကြရာ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရသွားခဲ့သည်။ သို့သော် သေအောင်မသတ်ခဲ့ကြပေ။ ၎င်းကုလားများသည် ဤသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမှာ မောင်တောမြို့နယ်တွင် မနေ၀ံ့တော့အောင် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။
ရခိုင် ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ေ၇ွှပြည် ရွာဟောင်း ကျေးရွာမှ ၃၃နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုရွှေသန်းမောင် ကို ဘင်္ဂလီများက ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှပ်သဖြင့် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရသည်။ ၂၉-၅-၂၀၁၂ ခုနှစ် ည၁၀ နာရီအချိန်တွင် ကုလားများက ၀င်ရောက် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ရာ ကိုယ်ဝန် (၈)လရှိသောအမျိူးသမီးတစ်ဦးသည် ကလေးထွက်ကျသွားသည်အထိရိုက်နက်ခံရပါသည်။
(၁၁-၉-၁၂)ရက်နေ့က ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ သရက်အုပ်ကျေးရွာမှဦးကျော်မောင်ချေ (အသက်-၆၃)နှစ် ဆိုသူ
ရခိုင်သားတစ်ဦးလည်ပင်းကိုလှီးဖြတ်၍ အသတ်ခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရုတ်သည် မြန်မာတို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိတာ မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည် သို့သော် ကုလားက အဆပေါင်းများစွာ ပိုပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။ ရှေ့က တရုတ်ကို မဲနေချိန်တွင် နောက်က ကုလားက သင်တို့ကို ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဉ်ကျေးမှုကို ဝါးမြိုနေသည်ကို သတိပြုပါ။ www.MyanmarExpress.net
စိုင်းနော်ခမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးသူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူမဟုတ်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံသား ခံယူထားသူဖြစ်သည်။ စိုင်းနော်ခမ်းကြောင့် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း ဒေသမှာရှိတဲ့ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း နဲ့ လာအိုတို့က ပြည်သူအများအပြား မူးယစ်ဆေးကြောင့် ဘဝပေါင်းများစွာ ပျက်ခဲ့ကြရသည်။ နော်ခမ်းက အခုမှ ဆေးထိုးရင် သေရသူဖြစ်ပြီး နောက်ခမ်းကြောင်း ဘိန်းဆေးထိုးကာ သေဆုံးခဲ့ရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား အပါအဝင် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းမှ နိုင်ငံသားပေါင်း များစွာရှိသည်။ နော်ခမ်းသည် အာဇာနည်တစ်ယောက် မဟုတ်သော်လည်း ယနေ့ Facebook ပေါ်မှ မြန်မာတို့ အာဇာနည် တစ်ဦးအလား ဝမ်းနည်းကျေကွဲနေကြသည်။ နော်ခမ်းသည် နိုင်ငံနဲ့ လူထု အတွက် ဘာမှမလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် နိုင်ငံ၏ အနာဂတ် မျိုးဆက် သစ် အာဇာနည် ပေါင်းများစွာကို ဘိန်းစားဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာအပါအ၀င် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေက အလိုရှိနေတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် စိုင်းနော်ခမ်းကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ လာအို အာဏာပိုင်တွေက ရွှေတြိဂံဒေသမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်နယ်အတွင်းမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် နော်ခမ်းကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရင် ဆုငွေ ဘတ်နှစ်သန်းပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က ၂၀၁၂ ခုနှစ် က ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဖေဖော်ရီလတွင် မြန်မာနဲ့လာအိုနယ်စပ် မဲခေါင်မြစ်အတွင်း ကင်းလှည့်နေတဲ့ မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့့်် ရဲအုပ်တယောက်အပါအ၀င် (၁၅) ယောက်သေဆုံးခဲ့ရသည်။ မဲခေါင်မြစ်အတွင်းဖြတ်သန်း သွားလာတဲ့ သင်္ဘော၊ စက်လှေတွေကို ဆက်ကြေးကောက်၊ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် ကုန်သည်အများအပြား သေကြေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီး အမျိုးသမီးများ မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ရကာ ကလေးများ မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြရသဖြင့် တရုတ်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနဲ့လာအို အစိုးရတွေက အလိုရှိခဲ့ကြသည်။
စိုင်းနော်ခမ်း သေတဲ့ ကိစ္စ မှာ မိသားစုဝင် တစ်ယောက် အနေ အထားနဲ့ ဆိုရင်တော့ ၀မ်းနည်းစရာကိစ္စလေးပါ လူသားအချင်းချင်းတစ်ယောက် အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်း သနားစရာ စိတ်မပျော်စရာပါပဲ ဒါပေမဲ့ အကျိုးရှိလို့ အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ သူသာမူးယစ်ရာဇာမဖြစ်ခဲ့ဘူး မူးယစ် ဓါးပြ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုပါက ဘ၀လည်းဒီလိုဘ၀ ဆိုးဖြစ်စရာမရှိပါ။ သို့သော် နော်ခမ်းမှ သူများနိုင်ငံသား (၁၃) ဦးကိုသတ်ခဲ့သည်။ ထို (၁၃ ) ဦးမိသားစုဝင်ကနေကြည့်မယ်ဆို ရင် သူ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ၁၃ ဦး နဲ့ အလှဲအလဲပေးခဲ့သဖြင့် အရှုံးမရှိပါ။ နော်ခမ်း၏ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် ဘဝပျက်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုများများ၊ နော်ခမ်းကြောင့် ဆေးထိုးအပ် တန်းလန်းနှင့် သေဆုံးခဲ့ရသော မျိုးဆက်သစ် မြန်မာများ အများအပြားရှိနေပြီး ထိုအထဲတွင် သင်တို့၏ မိသားစုဝင်ပါနေပါက နော်ခမ်းသေဆုံးမှုအတွက် သင်ဝမ်းနည်းမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် နော်ခမ်းသာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးကို သတ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှ သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါက သင်ဝမ်းနည်းချင်မှ ဝမ်းနည်းလိမ့်မည်။ တရုတ်သတ်လို့ သေတာ အခုမှသာ ဖြစ်သည်။ တရုတ်မှ သတ်တာတောင် ညှင်ညှင်သာသာဖြင့် ဆေးထိုးသတ်ခဲ့သည်။ ကုလားသတ်လို့ သေခဲ့ရသူ အများအပြားရှိသည်။ လည်လှီးသတ်ခံရသည်။ မုဒိန်းကျင့်ပြီးမှ ရုတ်ပျက်ဆင်းပျက် သတ်ခံရသည်။ ထိုအသတ်ခံရသူများမှာ နော်ခမ်းကဲ့သို့ သူတပါးအား ဒုက္ခပေး ဘဝပျက်အောင်လုပ်နေကြသူများမဟုတ်ပါ။ ရိုးသားသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသူ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။
အိအိဖြိုး နှင့် တောင်းဆိုနေသော စစ်ဗိုလ်များ သို့..
တွင် အိအိဖြိုး ဓာတ်ပုံနှင့် ပိုစ့်တစ်ခု တင်ထားပါသည်။ ယင်း ပိုစ့်တွင် အိအိဖြိုးအကြောင်း တစ်ခုမှ ရေးသားထားခြင်းမရှိပါ။ အိအိဖြိုး၏ ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံ
တင်ထားပြီး နှစ်ပုံ မှာ လုံခြုံသော ပုံများ ဖြစ်၍ တစ်ပုံမှာ အပေါ်ပိုင်း မလုံခြုံသော်လည်း ဆင်ဆာ ဖြတ်ထားပါသည်။ မည်သို့မည်ပုံ စဉ်းစားတွေးတောကြသည် မသိ ယင်း ပို့စ်အား ဖျက်တ်ရန် နှင့် ဓာတ်ပုံ အားဖြုတ်ရန် တောင်းဆိုမှုများ (အထူးသဖြင့် စစ်ဗိုလ်များ) ကို တွေ့ရပြီး Comment အများအပြားကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းပုံများသည် ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ယူထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း Myanmar Express ကို သာ ထူးထူးခြားခြား လာရောက် ဖျက်ခိုင်း နေသည်ကို တွေ့ရသည့်အပြင် အိအိဖြိုးနှင့် မဆိုင်သော ပို့စ်ကို ပါ ဖျက်ခိုင်းလျှက် ရှိသောကြောင့် အိအိဖြိုးနှင့် ပတ်သက် ဆက်စပ် ကြကုန်သော စစ်ဗိုလ်များ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အိအိဖြိုး၏ ဒဿနများကို တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ အိအိဖြိုးရေးသားထားသော စာပိုဒ်များမှ ရုရှားက ငနဲ တွေ မကောင်းကြောင်း၊ အစိုးရမကောင်း ကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် မကောင်းကြောင်းများကိုလည်း ဖျက်ခိုင်းရန် မမေ့ကြပါနှင့်။ Myanmar Express သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက Blog လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်း Facebook သုံးကာ ပြည်ပရောက် အဆိုးမြင်သူများကို ဆုံးမလျှက်ရှိသဖြင့် Facebook သုံးတာ မကြာသေးခင် ကောင်မလေးများ အသံအရသာခံပြီး သမိုင်းကိုမစုံစမ်းပဲ ဆရာလုပ်ကြခြင်းကို ရှောင်ကြပါ။ အိအိဖြိုး ၏ ဓာတ်ပုံအားလုံး ကြည့်လိုပါက http://drchatgyi.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html တွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဖျက်ခိုင်းလိုက်ကြပါ။ အိအိဖြိုး၏ ရုရှားက ငနဲ များအကြောင်း နှင့် အုပ်ချုပ်သူမကောင်းကြောင်း ရေးထားမှုများကို http://www.facebook.com/ei.t.nay တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သူမဖက်က မှန်ကန်ပါက ဖျက်ပစ်မည်မထင်ပါ။
Myanmar Express ကို ဖုန်းဖြင့်ဖတ်ရန်အတွက် Apk download လုပ်ပါ Click Here メタトレーダー5
"၁၇ နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျပြီး ၁၈ နှစ်မှာ ကလေးရခဲ့တယ်" ~ မေမြတ်မွန် (Facebook အဆိုတော်)
လှေစီးဒုက္ခသည်များကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်ခံပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆို
ဆေးရုံးပေါ်တွင် ဓာတ်ဆားရည် ချိတ်ထားရင်းတန်းလန်း လိင်ဆက်ဆံကာ Facebook ပေါ်တင်သည့် အမျိုးသမီး တရားဆွဲခံရနိုင် NLD အား အမျိုးသား သစ္စာဖောက်အဖြစ် ဆရာတော်ကြီးများ ကြေညာ
ပါဖော့မန့် အသစ်တွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုကြ
"သံဃာကို ဖာသည်မသားလို့ ခိုင်းနှိုင်းဆဲဆိုလိုက်တဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်" ~ အရှင်ဝိမလဝံသ(နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်)
ကျမက သမ္မတရူး ပါမောင်
NLD အတွက် ၀မ်းနည်းတယ်၊ သူတို့လမ်း သူတို့ ရွေးသွားတာပဲ
သာကေတ မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်း
ပင်လယ်ထဲ တွေ့သမျှ ဘင်္ဂလီတွေကို မြန်မာနုိုင်ငံက လာပါတယ်လို့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြောနေသူ များ အတွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှင့် လုံခြုံရေး ကွန်ပျူတာ သမား တို့ မွေးထားတဲ့ တတိယ မြောက် မျိုးဆက်သစ် ဒေါ်စုကြည်ရဲ့သမီး ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ
ဒေါ်စု နှင့် ပါကစ္စတန်သား ချစ်တင်းနှောစဉ်က ဓာတ်ပုံများ
အင်တာနက်မယ် နန်းခင်ဇေယျာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု နောက်ဆက်တွဲ နမ်း ရမည့် ဇတ်ဝင်ခန်း ကို မရိုက်နိုင်၍ နှုတ်ထွက် သွားသော သက်မွန်မြင့် နေရာတွင် အနမ်း ခံလိုသော မြန်မာ sexy မင်းသမီး ဖွေးဖွေး သရုပ်ဆောင်မည်
ဟီရိုရှီးမားကို အဏုမြူဗုံး ကြဲခဲ့သည့် လေယာဉ်မှ နော...
NLD အကြွေး ၉ သိန်းကျော်အား ဗလီတစ်ခုမှ ဆပ်ပေးမည်
လွှတ်တော်အမတ်တွေ အသုံးစရိတ် ကြိုတင်ငွေ လေးသိန်းရ
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အသေခံဗုံးခွဲ၍ သမ္မတကာဇိုင်း၏ညီဝမ်း...
အမျိုးသမီးများကို စွမ်းအား တိုးစေမည့် အစားအစာ ၁၀ မ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းများဆွေးနွေးပွဲ ငြင်းခံ...
နောက်တစ်ခါကျွန်မကို အတုလားလို့ လာမမေးကြနဲ့တော့ဟု ...
ပြန်ကြားရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ၂ ဦးအား ၄င်း...
အချိုးကျကိုယ်စားပြုရေး ထင်သလောက်မရှူပ်ထွေး (Proport...
PR စနစ် ကျင့်သုံးရေး ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု ...
အိမ်ဖြူတော်ကို နျူကလီးယား လက်နက်ဖြင့် တိုက်မည်ဟုေ...
ဗိုလ်ချုပ် တင်အောင်ချစ်အား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒ...
ပီအာရ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါက စည်းလုံးမှု ထိပါးစေနု...
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲများ၌ ပရိသတ်များကို အ...
လုံခြုံမှုမရှိသေးသည့် တိုင်းပြည်လက်ရှိအခြေအနေတွင် အ...
"ပီအာစနစ်ကျင့်သုံးပါက ကျနော်တို့ ချင်းတိုင်းရင်းသ...
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်အ...
၄၃၆ နှင့် ၂၀၁၅ ~ ပိုက်တင်
အရေးကောင်းသူများ အကောင်းရေးကြ စေချင်
လက်မှတ် ၅ သန်း၏ နောက်ကွယ်
ဇူလိုင်(၂၆)ရက် လက်ပံတောင်းတောင် ပစ်ခတ်မှု အစိုးရသတင...
၂၀၁၅ ပြမည်ဟုကြွေးကြော်ထားသည့် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ၂...
NLD ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် လူငယ်တစ်ဦး ဖွင့်ချတဲ့ ပုဒ်မ၄၃၆ြ...
မီဒီယာသမားများ ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမှု အားနည်းကြောင်း စာ...
ELEVEN MEDIA မှ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊ စာနယ်ဇင်းကောင...
မယ်စကြ၀ဠာ(မြန်မာ) ၂၀၁၄ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီး
စိတ်မနှံ့ဖြစ်ခါစ အလုပ်သမတစ်ဦးအား မြန်မာသံရုံးနှင်...
“ရိုဟင်ဂျာ” ဟူသည့် စကားလုံး မသုံးရန် ကုလကိုယ်စားလှ...
ဓမ္မစေတီမင်း ခေါင်းလောင်းတော်ကြီးအား ယခုနှစ်အတွင်း ...
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးပါက ယာဉ်မောင်းခွင့် ရာ...
တရားဥပဒေနှင့် အညီ နေထိုင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မည်ဆိ...
ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောက်စိမ်းနှင...
ခင်ပွန်းသည်၏ လိင်တန်ကို မှားဖြတ်မိသည့် ဆေးရုံအားေ...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလက်တွေ့ နှင့် အချိုးကျရွေးချယ်တင်...
ဘာသာပြောင်းမှုကြောင့် သေဒဏ်ချမှတ် ခံရဖူးသည့် အမျိုး...
မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ကောင်းမြတ်ဟိန်းမှာ ရေနစ်သေဆုံြး...
အမျိုးသမီးတွေ လိင်အင်္ဂါ ဖြတ်တောက်ဖို့ ISIS အမိန့်ထု...
အယ်လ်ဂျီးရီးယား လေကြောင်းပိုင် ခရီးသည်တင်လေယာဉ် ပျ...
PR စနစ်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးဖို့ လွှတ်တေ...
ပြည်သူကိုဗဟိုပြုတဲ့ ပြည်သူ့ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲများ...
တရားဝင်ထွက်ရှိမလာသေးသော်လည်း Nine One နှင့် နီနီခင...
ခိုးယူလာတဲ့ ၀တ်စုံကိုဝတ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Faceboo...
ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတေဇ မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှ...
ဖောက်ပြန်သည့် မက်ဆေ့များကြောင့် ဇနီးသည်အိပ်နေစဉ် တ...
ဒေါသထွက်နေသည့် မွတ်ဆလင်အကြမ်းဖက်သမားများ ဘင်္ဂါလီကျေ...
မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်တဲ့ NLD
အခုချိန်ထိတော့ မြန်မာ့မီဒီယာ NO ပါ
ယနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် လူမှူကွန်ယက် အခြေအနေ
ကုလားအားပေး ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ကို အစ္စရေးပြည်သူတွေ က...
MH 17 မှ ရုပ်အလောင်းများကို နယ်သာလန်သို့ လွှဲပေးရန်...
ဝန်ထမ်း၊ ပင်စင်စားနှင့် ပြည်သူများအတွက် တန်ဖိုးနည်...
ပရဟိတကို အတွင်းကျကျ မလုပ်ပဲ လူထင်ကြီးအောင် အပေါ်ယံလ...
လူမှုကွန်ရက်တွင်ဖော်ပြသည့် လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် အွန်...
ဒုတိယအကြိမ် Miss Universe Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲကြ...
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ် မြန်မာကို...
ဆောင်းပါးရှင် ဆရာစည်သူအောင်မြင့်ဖတ်ဖို့ (ပေးစာ- ၂၅...
သုံးလအတွင်း ရန်ကုန်တွင်အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ၃၀၀ ကေ...
ကေအိုင်အေ၏ အတင်းအဓမ္မလူသစ်စု၊ ဆက်ကြေးကောက်နေမှုနှင့်...
၂၀၃၀ မှာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ထိန်းချုပ်နိုင်တော့မည်
ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ မိုင်းနောင်ကျေးရွာမှ ရွာသားနှစ်ဦး...
မန္တလေးတွင် ညမထွက်ရအချိန် ၂ နာရီလျှော့ချ
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်း ကို ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ေ...
ရခိုင်မူဆလင်ဆိုသည်မှာ ယခင်ကလည်းမရှိ ယခုလည်းမရှိကြေ...
မျိုးရန်နောင်သိမ်း၊ မမြန္ဒာ၊ မချို နဲ့ ၁၇ နှစ်သမီး ...
၉ နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်နှင့် ၆၂ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး...
ကမ္ဘာ့ သြဇာအရှိဆုံး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းတွင် ဒေါ်စု မပါ...
ဒေါ်စုပါတီအား ငွေထောက်ပံ့ထားပြီး အာဏာရရှိအောင်ဆောင်...
NLD ပါတီမှ ပုဒ်မ-၄၃၆ ပြင်ဆင်ရန်စည်းရုံးရာတွင် မသမာ...
MH-17 လေယာဉ်တွင် မြန်မာသို့လာရောက်လည်ပတ်မည့် မိသား...
လူမှုတာဝန်သိသော သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကျင်း...
ဆန်း လဘက်ရည်ဆိုင် မုဒိန်းမှု ပြည်ထဲရေး သတင်းထုတ်ပြန...
မလေးရှားလေယာဉ် ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ချခံရကြောင်း သမ္မတ ...
"ဖေဖေမကျခဲ့လိုက်သော မျက်ရည်တစ်စက်" ~ အောင်ဆန်းဦး (...
ကေအိုင်အို ဆိုင်းဒါတိုက်နယ်မှူးရုံး၏ ဒေသခံများအပေါ်...
အာဇာနည်နေ့ မှ အလွဲများ
မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဘတ်ငွေသန်း ၁၂၄၀၀ ရင်းနှီးမြှု...
အရင်နှစ်များထက် ထူးထူးခြားခြားကျင်းပရန် ရည်ရွယ် ထာ...
တရားမ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးကို သယ်ဆောင်လာသည့်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ လွဲ၍ ကျန်အားဇာနည်အားလုံး မိသ...
အမေကျော် ဒွေးဒေါ်လွမ်းသူ စည်သူအောင်မြင့်ဖတ်ဖို့ ဝံသ...
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးများ အသစ်လ...
ခရီးသည် ၂၈၀ နှင့် လေယာဉ် အမှုထမ်း ၁၅ ဦးလိုက်ပါလာသည...
ရုရှားတို့မမှုတဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို...
လစ်ဗျားပြောက်ကျားများက ထရီပိုလီလေဆိပ်ကို စီးနင်းတု...
တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်များ ဟုသုံးနှုန်းခဲ့၍ေ...
မြန်မာ-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံအကြား နည်းပညာပူးပေါင်းဆေ...
ယူနတီဂျာနယ် ကိစ္စ စာနယ်ဇင်းတွေ ဘာမှားနေသလဲ
စက်တင်ဘာတွင် စရောင်းမည့် တယ်လီနောဆင်းကတ် မြို့ကြီး...
မော်စကိုတွင် မြေအောက်ရထားတွဲများ လမ်းချော်သွားခဲ့ရ...
ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံဆုနဲ့လွဲခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားမှာ အ...
NLD ပါတီ (သို့မဟုတ်) ဖိုးတွမ်တီး ပါတီ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ခန်းများ ဖျက်...
အစ်ကိုအရင်းတစ်ယောက် သာမက သားအရင်း ၂ ယောက်ကိုတောင် ...
ကြံ့ခိုင်ရေး အမတ် ဦးနေမျိုးအောင်၏ စွပ်စွဲရေးသားသ...
7 Days မှ ဖော်ပြခဲ့သော ထိုင်းငါးဖမ်းစက်လှေသတင်းနှင...
တပ်မတော် နယ်လှည့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့မှ လက်ပံတောင်းဒေသတ...
ဝေဒနာခံစားနေရသူအား ဆေးထိုး သတ် ခြင်းကို ဘုန်းတော်ြ...
သံဃာတော်များကို စော်ကားခဲ့မှုအတွက် NLD အမတ် ဦးမင်းသ...
အီရန်တွင် Facebook ပေါ်၌ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ဆော...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၁ အားဖျက်သိမ်းသင့်သည...
လူနည်းစု ရခိုင်များကို လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း စင်ကာပူ သမ္မတနိုင...
မန္တလးမြို့ မှတ်တမ်းများ ပြန်ကြည့်နိုင်မည့် Data Ce...
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားသည့် မန္တလေးတွင် မွတ်ဆလင် ၁၅၀ ခန့်...
တာချီလိတ်၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မြေထိန်...
နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားစေသည့် သတင်းထော...
“ဂျီဟတ်” စစ်ပွဲ နှင့် ဂျီဟတ်ဆင်နွှဲခံခဲ့ရသည့် နိုင်...
ကမ္ဘာ့ဖလား၏ ရွှေဘောလုံးနှင့် ရွှေလက်အိတ် ဆုရှင်များ ဆ...
ပြည်သူချစ်သော သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်သူချစ်...
ယူနတီ ဂျာနယ်သတင်းထောက်များ ထောင်ဒဏ် (၁၀) ချမှတ်ခြင...
စိမ်းလန်းစိုပြေနေသော သစ်ပင်ကြိးတစ်ပင် ရုပ်တရက် ပြိ...
မန်းမြို့ တည်ငြိမ်လာသော်လည်း မြို့ခံအများစုက ညမထွက...
မလေးရောက်မြန်မာများကို ကူညီသူ ဦးမျိုးပိုင် အသတ်ခံ...
မစိုးရိမ်တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဆက်တိုက် ချိန်း...
"ပြင်ဖို့သိပ်လွယ်နေရင် ပါတီတစ်ခု တက်လာတိုင်း အခြေခ...
ဗလီအတွင်း လက်နက်များဖမ်းမိပြီး ဂျီဟက်ကြေငြာခံထားရ၍...
ဘရာဇီး ပရိသတ်ရဲ့ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲမှု
မွတ်စလင်နှင့် လက်ထပ်ခွင့် မပြုသောနိုင်ငံ (သို့မဟုတ...
ဘင်္ဂါလီနေအိမ်တစ်အိမ်တွင် စိတ်ကြွ ဆေးပြား ကျပ်သိန်း ...
မြန်မာကာချုပ် သို့မဟုတ် ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမာ...
ဘရားဇီး- ဂျာမဏီ 1-7 Fulltimes Highlight
Google နှင့် Facebook တို့ မြန်မာအစိုးရနှင့်ပူးပေါ...
နပခတိုင်းမှူးအသစ် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားနယ်စပ် ခြံစည်းရိုး ...
Bi မွန်းတည့်နေဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် အပါအဝင် သုံးဦးကိ...
အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်...
မီဒီယာသည် ဝံသာနုစိတ်ထက် လာဘ်လာဘကို ပိုချစ်ပါသည်.. ...
မလေးရှားတွင် တရားမ၀င်လုပ်သားများ ကူညီနေ၍ အောက်လမ်း...
မွန်းတည့်နေ ဘာလဲ ဘယ်လဲ?
မိုးသီးဇွန် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ပြန်လည် လျှောက်ထ...
အမျိုးသားရေးအန္တရာယ်တစ်ခု ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည့် မွတ်စလင...
Bi မွန်းတည့်နေ့ဂျာနယ်ပါ M.D.C.F ၏ ထုတ်ပြန်ချက်သတင်...
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အန္တရယ်ပေးလာပါက မီဒီယာများကို...
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အကြမ်းမဖက်ရန် တိုက်တွန်းသူ ...
မန္တလေးမြို့ ပဋိပက္ခ နှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန် မ...
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်” မဟုတ်တော့.. “လူမျု...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်နှင့် တေ...
မူဆလင် ညီနောင်များ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နှင့် နောက်လို...
မြန်မာများသို့ သတိပေးစာ (ပေးစာ-၂၅၈)
စတင်လှုံစော်သူ NLD ပါတီဝင်ဟောင်း သစ်ထူးလွင်၊ ပဋိပက္ခ...
မြစ်ဆုံလမ်းလျှောက်ရာတွင် ဦးဆောင်သူများကို ငွေကြေးအ...
မန္တလေး ဗလီအတွင်းမှ ဖမ်းဆီးရမိသော လက်နက်များ (ဓာတ်ပ...
ဒေါ်စုလည်း အိပ်မက်ထဲ လမ်းလျှောက်ဆဲ ~ အောင်တင်
အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ကုလား version ဖြင့် သီ...
၂၀၁၁ နောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခအားလုံး၏ တရားခံ DVB, RFA, B...
လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ အခြေအနေတ...
ပဋိပက္ခ တရားခံဟု ဝေဖန်ခံထားရသူ NLD ပါတီဝင်ဟောင်း သစ...
မန္တလေးတွင် ဗလီအတွင်း လက်နက်များတွေ့ရှိကြောင်း MRTV...
DVB, RFA, BBC, ဧရာဝတီ, ခေတ်ပြိုင် သတင်းထောက်ဟောင်း...
ဦးဝီရသူ အသက်အန္တရယ် ခြိမ်းခြောက်ခံရမှု ဒေါ်စု၊ ဒဲရစ်...
ဦးရွှေမန်းစကား ဒေါ်စု ဒေါသဖြင့်တုန့်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကင်မယာပါသည့် ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူမ...
လုံခြုံရေးရဲများကို မွတ်ဆလင်များက မချေမငံဆက်ဆံနေခြ...
ဂျီဟက်ကြေငြာထားသော ဗလီများအား အရေးယူရေး ရန်ကုန်မြိ...
မင်းတို့က ဗမာလူမျိုးလားလို့မေးတယ်.. မင်းတို့ပစ္စည်း...
ဓားနှင့် လှံများ သိုလှောင်ထားသည့် ဗလီအတွင်းမှ လူ အ...
လူမျိုးခြားကုလားကြောင့် မန္တလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း(၂)...
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်မှု အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ဟု မန္တလေြး...
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်သော မိန်းကလေးအား အဓမ္မြ...
မန္တလေးတွင် ဆူပူမှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့သော သစ်ထူး...
အထူးသတိထားရမည့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှ မွတ်ဆလင်တို့၏ သွေ...
ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေသည့် မန္တလေးမြို့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်...
၄၃၆ လှုပ်ရှားမှုနှင့် အသုံးချခံ ၈၈ မျိုးဆက်
နာဂစ်အခြေခံဥပဒေ မှ အဓိကရုဏ်း ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးသို့
ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၄ အရ အမိန့်ထုတ်ြ...
“မန္တလေး နောက်ဆုံးအခြေအနေ” ~ အကြမ်းဖက်သူများအား ပစ်...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာ ရှက်မိလာတယ်
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဇွန်လကုန် ရေဒီယို မိ...
"ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်းအတူ စီးသွားတာကို ဝိုင်းတားပြီး ...
မြန်မာနယ်စပ်မှ လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူများကို မြန...
အောင်ရင်ငြိမ်းက သူရေးချင်တာတွေပဲ ရေးထားတာ ကျန်းမာေ...
ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ် အတွင်း ငွေနှင့် ပ...
မန္တလေး ကိစ္စအတွက် NLD ထုတ်ပြန်ချက်အား ဆန်းစစ်ခြင်း
မန္တလေး ၂၇ လမ်း အဓိကရုဏ်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ဗွီဒ...
မန္တလေး ၂၇ လမ်း အဓိကရုဏ်း အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ချက်
တဖက်တွင် လက်မှတ် ၃၃ သိန်း ရကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်...
ဆန်းကဖေးဖြစ်စဉ် အပြီးနောက် မွတ်ဆလင် မီဒီယာအချို့ေ...
မန္တလေး အဓိကရုဏ်း သတင်း (အပြည့်အစုံ)
မန္တလေး ၂၈ လမ်းတွင် ကုလား-မြန်မာ အဓိကရုဏ်း စတင်
NLD ပါတီ၏ လက်မှတ် ၃.၃ သန်းမှာ လိမ်ညာထားခြင်းသာ ဖြစ...
သံသယဖြစ်ဖွယ် လက်မှတ် ၃၃ သိန်း
ပြင်ဦးလွင်ကို ဒုက္ခပေးလာမည့် ယူကလစ်တော
အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး အသေသတ်မြေမြှုပ်ခံရသော မိန်းကလေး မ...
မန္တလေးတွင် စည်းကမ်းမဲ့စွာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်...
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် တရုတ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစ...
ကန့်ကွက်မည်ဟု မီဒီယာများက ဝါဒဖြန့်ထားသော်လည်း ပြည်...
မက္ကစီကိုတွင် ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတစ်ခုနှင့် ရဲများ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး လူ ၄၀ ကျော်သေဆုံး
မက္ကစီကိုတွင် လက်နက်ကိုင် ဒုစရိုက်ဂိုဏ်း တစ်ခုနှင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး လူ ၄၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မေလ ၂၂ ရက်က ဂျာလစ္စ...
From : .. VOA
သြစတြေးလျား နိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို အခြေချ နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝန်ကြီးချုပ် Tony Abbott ကပြောကြား လိုက်ပြီး နိုင်ငံရေး ...
ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေရဲ့  ဒီလိုအပြုအမူတွေက ချစ်သူကောင်လေးတွေကို သူတို့ဆီက အဝေးကို ထွက်ပြေးစေတတ်တာ
ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ ဒိတ်လုပ်တာ သိပ်မကြာသေးတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြောအဆိုနဲ့ အပြုအမူတစ်ချို့ကြောင့် ကောင်လေးတွေဘက်က ဆက်မတွဲရဲတော့ပဲ နေ...
“လယ်ယာမြေများ သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသည့်အပြင် ထောင်ချခံခဲ့ရသော အဘွားအိုများအား မ.ဘ.သ ဆရာတော်များ သွားရောက်ထောက်ပံ့”
*နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ရွှေအင်ကြင်း(၂)ရပ်ကွက်မှ အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ် အဖွားဒေါ်တင်လှိုင်နှင့် အသက်(၈၃)နှစ်အရွယ်အဖွားဒေါ်ညိုတို့သည် လယ်ယာမြေများ သိမ်းဆည်းခ...
Channel News Myanmar
တပ်ကုန်းမြို့ ညောင်ပင်သာကျေးရွာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ဖြင့် ၂၄ နာရီ ပတ်လုံး မီးရရှိ၍ ဒေသခံများဝမ်းသာပျော်ရွှင်ည
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ တပ်ကုန်းမြို့နယ် ခရမ်းစပ် ကုန်း ကျေးရွာ အုပ်စု ညောင်ပင်သာကျေးရွာ လေးသည် ယခုအခါ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားစနစ်မှ ၂၄ နာရီပတ်လုံး မီးစတင် ရပြ...
*Sesi Beginner: Asas FCPO & J-Trader*
· Cara membeli dan menjua...
After New Update in Bing Ads. We are offering Bing $160 Coupon. Nowadays Bing is allowing only One Coupon per account.
I will provide Bing 160$ coupon f...
ယနေ့ည ပခုက္ကူမြို့နယ် မြစ်ခြေ မြို့ မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ကုလား ဗမာ အဓိကရုံး ဖြစ်စဉ်မှာ
အိမ်ရှင် လဲဖြစ် အလုပ်ရှင်လဲ ဖြစ် မွတ်ဆလင် ကုလား မိုးဝင်း ထံ အိုင်ရှည်ရွ...
ကျနော် တို့လူမျိုးမှာ အစွဲအလန်း တခု ရှိတယ်။ ဥပမာ ဘဝသံသရာ လို့ သီချင်းဆိုလိုက်တာနဲ့ ရထားတစ်စင်း တံတားပေါ်ကဖြတ်သွားတဲ့ပုံကို တွဲ မြင်တယ် ။ တခြားပုံ မမြင်တတ်...
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် တပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်
ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မီဒီယာတွေရဲ့ ရေးသားမှုတွေကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သ...
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်နား က ဦးလေးကြီး တစ်ယောက်က စောရနက္ခတ်နဲ့ မွေးတယ် ။ လိုချင်လို့ ခိုးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ၊ သူရဲ့ဗီဇ ကို က မခိုးရ မနေနိုင်ဘူး ။ အရပ်ထဲ...
၈၈ငွေရတု အထိမ်းအမှတ်ပွဲသို့ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအား ထောက်ပံ့ပေးနေသော ကုလားများပါတက်ရောက်ခဲ့ ...
၈၈ငွေရတု အထိမ်းအမှတ်ပွဲသို့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့် ကုလလားများပျော်ပျော်ပါးပါးဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနေကြကြောင်း
ထိုပွဲသို့ သွားရောက်ခဲ့ သော ဒေသခံတစ်ဦးမှ ပြေ...
KIA မှ မြစ်ကြီးနားမှပူတာအိုလာတဲ့ ကားရပ်ခိုင်းပြီး ကျောင်းဆရာမနဲ့ ကျောင်းသူများအား ဖမ်းဆီး
မနေ့ မနက်၁၀နာရီလောက်တုန်းက မြစ်ကြီးနားမှ ပူတာအိုဘက်သို့လာတဲ့ ကားတစ်စီးကို KIA အဖွဲ့ မှ လူ
၁၅ဦးလောက်က က၀ပန်းရွာနားမှ တားပြီး ကျောင်းဆရာမ ၃ဦးနဲ့ ၁၀တန်း ကျေ...
မြစ်ကြီးနာမြို့ပေါ်က-ကချင်အများစုနေတဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာကောလဟလသတင်းတွေပြန့်နေတယ်လို့ ကချင်သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးက KDNသို့ ပြောဆိုပါတယ်။ သင်းအုပ်ဆရာဦးလနန်ဘောက်နော်က ...
အားငယ်စရာမလို ကမ္ဘာမှာနေရာယူထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီးဆီသို့ ချီတက်တဲ့ နေရာမှာ ဘက်စုံထောင့်စုံ ကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက် ကောင်းနေလို့လည်း မရပါဘူး။ တစ်...
နိုင်ငံသမိုင်း မိမိသမိုင်းကို တန်ဖိုးထား လေးစားပြီး လူအများအား အသိပေးဖော်ပြချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဆိုရင် စာလုံးပေါင်းကို မှန်အောင်ရေးစေချင်ပါသည်။ အပေါ်ကပုံသ...
ကိုရီးယား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံမှု နှစ်(၄ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
[image: ကိုရီးယား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံမှု နှစ်(၄ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ]
နေပြည်တော် မေ ၂၂ ကိုရီးယား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အကြာ...
UNFC ဘာလဲ ???
စိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်း ပြောရရင် …
၀ တို့ အသုံးချခံလိုက်ရပါပြီ …
မေ ၁ ရက် …
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို …
၀ ဒေသတွင် ကျင်းပမည် …
အသက် ၄ နှစ် အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ဆီးရီးယားကလေးငယ်တစ်ဦးပါ။ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦးက သူ့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် အနားကပ်သွားပြီး ကင်မရာနဲ့ ချိန်လိုက်တဲ့အခါ အ...
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဝှေခါလမ်းဆုံတွင် တပ်မတော် နှင့် ပူးပေါင်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဝင် များက လမ်းကြောင်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်စဉ် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘ...
Xcode v6.1.1 Mac OS X
[image: Xcode v6.1.1 Mac OS X] *Xcode v6.1.1 Mac OS X*
Xcode provides everything developers need to create great applications for M...
မြိတ်-ထားဝယ် ကားလမ်း မိုင် တိုင် အမှတ်(၈၅/၄)အနီးယာဉ်တိုက်မှုဖြစ် ABSDF ကျောင်းသား တပ်မတော်မှ ရဲဘော် တစ်ဦး သေဆုံး
၂၀၁၄ ဧပြီလ ၇ ရက် မွန်းလွဲ (၃)နာရီခန့်က ပုလောမြို့နယ် ထမင်းမစားကျေးရွာ အုပ်စု တော်ဝင်ကျေးရွာ အနီး ကားလမ်းမ ပေါ်တွင် ထားဝယ် မှ မြိတ်သို့မောင်းနှင် လာသည့် "ရွှေ...
“လိမ်နည်းသုံးမျိုးရှိတယ် - - ရိုးရိုးလိမ် - ဗြောင်လိမ် - နှင့်စာရင်းအင်း” (လီယိုတော်လ်စတွိုင်း)
There are three kinds of lies: lies, outright l...
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း သည် ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် (၁၁) နာရီခွဲ တွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း၊ ဒုတိ...
ပြည်ထောင်စု ဥပဒေအရပဲ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းမည် ဆိုပါက မိမိတို့အနေဖြင့် ဤဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇံမြင့်
(က)-ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်း ဥပဒေ အရလျောက် ထားချက်များအား အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ခွင့်ပြုမိန့် ချမှတ်ပေ...
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အနောက်ဘက် အစွန်းပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာ စတုရန်း မိုင်ပေါင်း ၁၄၂ဝဝ ကျယ်ဝန်းသည်။ ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်...
စစ်ကိုင်းမြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲမှု ကျူးလွန်သူ နှစ်ဦးကို စီစီတီဗွီ ကင်မရာများမှ တစ်ဆင့် ခြေရာခံ ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဟု သိရ
[image: Photo: စစ်ကိုင်းမြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲမှု ကျူးလွန်သူနှစ်ဦးကို စီစီတီဗွီ ကင်မရာများမှ တစ်ဆင့် ခြေရာခံ ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဟု သိရ Th...
မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့ထိ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ ရှိ The Nobel Institute & Voksenaasen တွင် ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ)များအပေါ် မြန်မာ၏ နှိပ်ကွပ်မှု အဆုံးသ...
လမ်းပြကြယ်ပါတီ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိ
ပဲခူးမြို့အခြေဆိုက် ပါတီတစ်ခုဖြစ်သော လမ်းပြကြယ်ပါတီအား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မေလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်
အမေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၈၇နှစ်က ကျောက်တန်းမှာ ဖခင်ရှေ့နေ ဦးသွယ် မိခင် ဒေါ်ခင...
လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမှန်တံဆိပ်တုံးနှိပ်မဲပေးစနစ် ကျင့်သုံးမည်
အမှန် အမှတ်အသားပါ ရှိသော တံဆိပ်တုံးကို ထုနှိပ်၍ မဲပေးရမည့်စနစ်ကို လာမည့်၂၀၁၄ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် စတင် ကျင့်သုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စ...
တံတားဦး NLD ဥက္ကဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခင်သန္တာမှ အမေ့အိမ်ပညာဒါန အလှူငွေ သိန်း ၅၀ ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့
တံတားဦးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်သန္တာမှ အမေ့အိမ်ပညာဒါန အလှူငွေ သိန်း ၅၀ ကျော်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြေ...
အနာဂတ်တွင် ထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရှိသည့် Windows နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို Windows နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆက်စပ် သတင်းများ ဖော်ပြပေးသော ရုရှားဝက်ဆိုက် WZ...
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့နှစ်ပေါင်း၅၀နီးပါးအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာ ကာကွယ်ရေး ၀န်ြ...
ကလေးဘဝမှာ ခုန်ပေါက်ဆော့ ကစားရာက ကြီးပြင်းလာတဲ့ သမီးမိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ကြိမ် တစ်ခါမှ ရာသီမလာ ဖူးသေးတဲ့ အတွက် ရာသီအကြို ဝေဒနာ အကြောင်းကို ကြိုတင် သိရှိမထား...
တစ်ခါတုန်းက မာယူကဂျီလို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေးကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုမှာ
သူ့မှာ သူကိုယ်တိုင် မွေးထားတဲ့ ကြောင်လေးတစ်...
ဒါမျိုးကျ လူအခွင့် အရေး အော်ကြပါဦးလား အပေါင်း အပါတို. ရဲ..2years ago
ခေါင်းစဉ်ကိုက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယနေ့ပြုမူလှုပ်ရှားပြောဆို လုပ်ကိုင်မှုတွေ အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦးရဲ့ ရိုးရိုးသားသား ရှင်းရှင်းလင်းလင်...
မြန်မာ့အလှ မြန်မာရူခင်းလေးတွေကို အချိန်ပေးပြီး တင်သွားပေးပါအုန်းမယ်ဗျာ...